के गर्ने यदि मेरो बिरालो अनुहारमा पर्थ्यो, हामी तपाईंलाई उसको उपचार गर्ने तरिका सिकाउँदछौं Noti बिरालाहरू
मोनिका सान्चेज | | रोगहरू, ट्रिक्स
के तपाईं भर्खर उठ्नु भयो र तपाईंले आफ्नो फ्यारी पाउनुभयो जुन राम्रोसँग हिंड्न सक्दैन? यदि हो भने, तपाई सायद जान्न चाहानुहुन्छ के गर्ने यदि मेरो बिरालो अimp्ग प .्योतसर्थ, यो एक जरुरी मामला हुनसक्दछ, हामी चरणबद्ध रूपमा चरणमा हेर्दै छौं तपाईंले गर्नुपर्ने सबै कुरा ताकि तपाईंको साथीले सकेसम्म चाँडो निको हुन्छ।
तर, सबैभन्दा पहिला, हामीले के गर्नुपर्दछ पहिले शान्त हो। हो, मलाई थाहा छ, तपाईंको साथीलाई पीडा हुँदा यो गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यी पशुहरूलाई हामी कस्तो महसुस गर्छौं भन्ने बारे राम्ररी थाहा छ र यदि तिनीहरूले कुनै निश्चित तनाव महसुस गरे भने उनीहरूलाई सकेसम्म शान्त रहन सजिलो हुँदैन, जुन हामीले उनीहरूको हेरचाह गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। त्यसो भए, सास फेर्नुहोस्, यसलाई १० सेकेन्डको लागि समात्नुहोस् र अलि-अलि सास फेर्नुहोस्। के तपाई अझ राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ? हो? त्यसो भए सुरू गरौं र हेरौं किन मेरो बिरालो लंगो छ।
जे होस् सबै भन्दा पहिले, हामी सँधै सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई चन्ड्रोप्रोटेक्टर दिनुहोस् जुन उनीहरूको जोर्नीहरूको रक्षा गर्दछ र यस प्रकारको अवस्थाबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
इकुफर कोसेक्विन ... 45 ...
सबै भन्दा बढी संगठित गर्न को लागी, केहि हल्का लंगडापन को मामिला मा, र गम्भीर लंगडापन को मामला मा थाहा छ।
1 हल्का लंगडाई
2 गम्भीर लंगडाई
3 बिरालाको लme्गडा हुनुको कारण
4 बिरालोको पञ्जा कसरी पट्टी गर्ने
5 ब्यान्डिज गरिएको पंजाको साथ बिरालोको हेरचाह गर्दै
जब हामी हल्का पंगुको कुरा गर्छौं तब हामी ती पशुहरूलाई स .्केत गरिरहेका हुन्छौं जसमा जनावरले धेरै पीडा महसुस नगरी हिंड्न सक्छ। तपाईं गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो एक धेरै ठूलो गुनासो छैन। उसले आफ्नो पंजा चाट्छ, तर पीडाले उसलाई यसलाई सार्न रोक्दैन। बिरालालाई यस प्रकारको लme्गडो अवस्था हुन सक्छ जब एक मानव - वा ठूलो कुकुरले गल्तिले यसमा कदम चालेको छ, वा जब यसको पंजाको प्याडमा चोट लागेको छ।
गर्नु पर्ने? ठिक छ, तपाईंले प्रयोग गर्न सक्ने एक उपाय भनेको प्रभावित क्षेत्रमा शुद्ध एलो भेरा जेल लागू गर्नु हो, र एक दिन बित्न यो कसरी विकसित हुँदै जान्छ। यदि भोलिपल्ट हामी देख्यौं कि ऊ झुक्किएको छ वा उसले अझ गुनासो गर्न थाल्यो भने हामी त्यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानेछौं।। यदि हामीसँग जाने मार्ग छैन भने, वा यदि यो बन्द छ भने, अर्को खण्डमा म खुट्टा पट्टी कसरी गर्ने भन्ने कुरा वर्णन गर्दछु।
जब हामी गम्भिर लंगडाई को कुरा गर्छौं हामी ती बिरामीहरूलाई दर्साउँछौं जसमा बिरालोले यसको पञ्जा प्रयोग गर्न सक्दैन। यसले उसलाई धेरै चोट पुर्‍याउँछ, र यसैले उसको गुनासो ठूलो छ। यो हामीतर्फ आक्रामक बन्न सक्छ यदि हामी प्रभावित पंजा लाई छुन कोशिस गर्‍यौं।
बिरालाको लme्गडा हुनुको कारण
यदि मेरो बिरालो लंगो छ, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन यो चोटको कारण हुन सक्छ, हामी फेला पार्ने सब भन्दा साधारण मध्ये:
यी अवस्थाहरूमा, यो उत्तम हो जनावरलाई राम्ररी जाँच्नुहोस् तपाईको लंगडा हुनुको कारण के हो भन्ने बारे एक धारणा राख्नको लागि, किनकि यो के हो, तपाईले एक वा अर्को तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्नेछ। त्यसोभए, दर्दनाक क्षेत्र होसियारीसाथ जाँच्नुहोस्, र केहि खोज्नुहोस् (एउटा पिम्पल जो अडिएको छ, एक विदेशी वस्तु, आदि)। यदि तपाईं यसको खुट्टा मा सूक्ष्म कटौती छ भनेर देख्नुभयो भने, चिन्ता नलिनुहोस्: यी घाउहरू प्राय: उनीहरू आफैंमा निको हुन्छन्; अब, यदि तपाईले कुनै बाह्य तत्त्व देख्नुभयो जुन त्यहाँ हुनुहुँदैन, जस्तै एउटा भांपको स्टिंगर, तपाईं चिह्नको साथ यसलाई सावधानीपूर्वक हटाउन सक्नुहुन्छ। उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् यदि तपाईंलाई शंका छ कि उसको ट्युमर छ, वा यदि तपाई लाग्नुहुन्छ कि सबै ठीक छ तर बिरालोले धेरै गुनासो गर्दछ।
मात्र यदि हामीले याद गर्‍यौं कि यसको एक खुट्टा भाँचिएको छ, र केवल अत्यन्त चरम अवस्थामा, जुन यस समयमा हामीसँग आर्थिक साधन छैन, हामी यो गर्नेछौं। कसरी? यसैलेः एक जना व्यक्तिले बिरालोलाई समातिरहेको बेला, अर्कोले पञ्जाले पट्टि लगाउनु पर्छ वा यदि तपाईंसँग छैन भने तपाईं कपडा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं सामान्य रूपमा भाँडा सुकाउन प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसलाई चिपकने पट्टिहरूले सुरक्षित गर्न नबिर्सनुहोस्।
धेरै गम्भीर मामिलाहरूमा, जुन खुट्टाले देख्छ कि यो बन्द भएको छ, पशु चिकित्सकमा जान जरुरी छ। हामी यसलाई विभाजन गर्न सक्दछौं, तर वास्तवमा विशेषज्ञकोलागि यो गर्नु भन्दा उत्तम हुन्छ, किनकि यदि हामीले यसलाई गलत गर्‍यौं भने, बिरालो सदाको लागि ल la्गडो हुन्छ।
बिरालोको पञ्जा कसरी पट्टी गर्ने
यहाँ छन् एक बिरालोमा पञ्जा पट्टी गर्न कदमहरू जो लimp्गडो छ र राम्रो हिडन सक्दैन:
पट्टी, कपास, एक स्प्लिन्ट (आदर्श प्लास्टिक किन्नु हो, तर यो जरूरी छ भने तपाइँ काठ वा समान प्रयोग गर्न को लागी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ), चिपकने ड्रेसि,, तौलिया (वा कपडा): आवश्यक सामग्री तयार गर्नुहोस्। तपाइँ मा यो सबै पाउन सक्नुहुन्छ प्राथमिक उपचार किट.
तौलिया वा कपडाले पशुलाई कभर गर्नुहोस्, यसलाई काट्न वा कोरिनबाट रोक्नको लागि। यो पूर्ण रूपमा ढाकनु महत्त्वपूर्ण छैन, तर यसलाई यसको छेउमा राख्नुहोस्, र यसमाथि कपडा राख्नुहोस्, यसको टाउको नछोडी।
अब हामी कपासको साथ चार रोल बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं (तिनीहरू एउटा टुक्रा लिएर बनेका हुन्छन् र यसलाई औंलाहरूको बीचमा घुमाइन्छ)। एकपटक सकिसकेपछि, तपाईंले त्यसलाई पञ्जाको खुट्टाको औंलाहरूको बिचमा राख्नु पर्छ यसका पञ्जामा फस्नबाट जोगिन।
त्यसोभए, जब एक व्यक्तिले उसलाई समात्छ, उसले आफ्नो प्रभावित खुट्टालाई पट्टीले लपेट्छ।
त्यसो भए तपाईंले स्पिलिन्ट राख्नु पर्छ, जुन खुट्टाको समान लम्बाई हुनुपर्दछ। यसलाई एक चिपकने ड्रेसिंगको साथ सुरक्षित गर्नुहोस्।
अन्त्यमा, तपाईंले यसमा पट्टिहरूका तीन तहहरू राख्नुपर्नेछ, औंलाहरू माथिबाट शुरू गरेर, र फार्मेसीहरूमा बेच्ने चौडा चिपचापको एक परत।
एक पटक तपाईंको खुट्टा पट्टी भयो, अलि अलि गरेर तपाईंले राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ। तर यदि तपाई यो देख्नुहुन्छ कि यो खराब हुँदै जान्छ, पशु चिकित्सकलाई लाग्न नहिचकिचाउनुहोस्।
ब्यान्डिज गरिएको पंजाको साथ बिरालोको हेरचाह गर्दै
यो सजिलो छैन, तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि बिरालालाई शान्त राख्नु पर्छ, यो अत्यधिक सार्न बाट रोक्न। यो गर्न को लागी, हामी शास्त्रीय संगीत बजाउन सक्छौं -एक कम मात्रा संग -, प्रकाश मोमबत्ती कि बोक्न सुन्तलाको आवश्यक तेल वा उसको छेउमा उसलाई लाड गर्न को लागी बस्नुहोस्। यस तरीकाले हामी उसलाई शान्त राख्न सक्छौं, कम से कम केहि समय को लागी।
साहसी, ऊ पक्कै पनि निको हुनेछ 😉
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » के गर्ने यदि मेरो बिरालो लंप्स भयो
सिद्धान्तमा यो केहि गम्भीर हुनु आवश्यक छैन। यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि यो दुई दिनमा सुधार हुँदैन, वा यदि यो बिग्रियो भने, म सिफारिस गर्दछु यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाऊ।
नमस्ते मेरो बिरालोको बच्चा लimp्गडो छ र मलाई थाहा छैन किन तपाईं मलाई योमा राख्नु पर्ने हो वा केमा यसलाई सेवा पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ
Valería लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ यदि ऊ कतै खसेको छ वा गाडीसँग दुर्घटना भएको छ?
यदि तपाईले देख्नुहुन्छ कि उसले धेरै गुनासो गर्दछ भने, तपाईले उसको खुट्टामा पट्टी बाँध्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ जुन लेखमा संकेत गरिएको छ, तर यदि उसले केही दिन सुधार गरेन भने उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान सिफारिश गरिन्छ।
कार्लोस जोस भन्यो
नमस्कार, मलाई मेरो बिरालोको बच्चासँग समस्या छ, मैले यो देखेको छु कि यो अलि अलि पनी छ तर यति धेरै छैन कि मैले पन्जा जाँच गरें जुनमा यो लम्पुथ्यो र मैले देखें कि त्यो पंजाको प्याड छुटेको छ जस्तो गरी यसलाई खोलेको थियो।
कार्लोस जोसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते कार्लोस जोस।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु उसलाई उपचारको लागि डाक्टरमा लैजाऊ। यो सबै भन्दा राम्रो हो।
चिन्ता नगर। एलोवेरा बिरालाहरूका लागि विषाक्त हुँदैन। हो, यो केहि पखाला को कारण हुन सक्छ यदि rind को नजिकको पल्प प्रयोग गरीन्छ, तर केहि पनि छोटो समय मा आफैलाई सही छैन।
नमस्कार ... जब ऊ निको हुन्छ तपाईले उसलाई कुन पीडा औषधी दिन सक्नुहुन्छ?
मउरालाई जवाफ दिनुहोस्
म सुझाव दिन्छु कि तपाईले आफ्नो पशु चिकित्सकलाई सोध्नुहोस् जुन कुन तपाईंको बिरालोको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ। म पशु चिकित्सक होइन र म तिमीलाई त्यसका लागि सहयोग गर्न सक्दिन, मलाई माफ गर्नुहोस्।
मेरी बिरालो अचानक हिसाब गर्न थाल्छ र चिच्च्याउन थाल्छ जब ऊ तकिया वा केहि बिरुद्दमा ब्रश गर्छिन्, मानौं ऊ डरायो वा चोट लागेको थियो। उनी न त मलाई गर्छिन् न त उनी न herहरू हटाउँछिन् जब म उनको जाँच गर्दछु, उनी कतै गुनासो गर्दिन, तर कहिले उनी उनलाई उनको खुट्टाले छुन्छ जब उनी ओछ्यानमा पल्टिछिन्, उदाहरणका लागि, उनले पनि त्यस्तै काम गरिन्। मैले याद गरें कि उसको देब्रे फोर .मा थोरै ल l्गडो छ, र उसले दिनभर खेलेको थिएन र बडाहाड गरेको छ। ऊ ओछ्यानमा पर्दैन, न त प्रयास गर्छ, र ओछ्यानमा बस्न रुचाउँछ। के हुन्छ?
तपाईंले आफैलाई खस्किरहेको वा अरू केही हिर्काउनुभएको हुन सक्छ। सुरुमा यो गम्भीर देखिदैन, तर यदि तपाईं भोली सुधार देख्नुहुन्छ भने, यसलाई लिनुहोस् किनकि यसले मोच सक्छ।
मेरो-बर्षे बिरालाaदिन अघि तेस्रो तल्लाबाट पसे र पशु चिकित्सकले एक्स-रे गरे र सबै ठीकठाक भयो, केही पनि भाँचिएको छैन, आँखामुनि र नाकमा केही घाउहरू थिए। म उनको लंगडो देख्यो जब उनी पतन भयो, तर पशु चिकित्सकले उनलाई जाँचे र यसबारे केही पनि भनेन। हिजो मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र उनले माइक्रलाक्स रेचक राख्नु पर्थ्यो किनभने उनी शौच गर्छिन् र दिसा गर्दै थिइनन्। ऊ चल्दैन, ऊ आफ्नो ओछ्यानमा दिन बिताउँछ र खेल्न चाहँदैन। मैले बायाँ अगाडिको खुट्टामा एउटा लimp्गडो देखेको छु जुन कहिलेकाहीँ खुट्टालाई समर्थन गर्दछ र कहिलेकाहिँ गर्दैन। म चिन्तित छु किनभने पशु चिकित्सकका अनुसार उनीसँग केहि छैन, तर अब यो जान्छ कि ऊसँग एउटा लimp्गडो छ र म पशु चिकित्सकमा जान थकित छु कि म दिनहुँ जान्छु मलाई नयाँ कुराको खोजी गर्न लगाउँछन्। हेरौं कि मँ यहाँबाट अधिक जानकारी भेला गर्न सक्छु र आफैलाई निको पार्छु। मलाई लाग्छ कि म आज राती बोटको एलो भेरा लगाएर सबै खुट्टामा प्रयास गर्छु। कुनै थप विचारहरू?
वैरेलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंको बिरालोलाई के भएकोमा धेरै दु: खी छु। तर म एक पशुचिकित्सक होईन र म तपाईंलाई पेशेवरको जस्तो मन पराउँदिन।
अझै, म तपाईंलाई भन्न सक्दछु कि केहि दिनको लागि उसको सूचीमा रहनु सामान्य कुरा हो, र यसले दुख्छ।
एलोवेराले तपाईलाई कुनै हानि गर्ने छैन, यसले तपाईलाई राम्रो पनि गर्न सक्दछ। तर तपाईं सुसंगत हुनुपर्दछ, र यसलाई प्रभाव दिनको लागि प्रत्येक दिन यसलाई लगाउनुहोस्।
अझै, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, हर्बलिस्टबाट अर्निका क्रीम लिनुहोस्। यो मांसपेशिको पीडा कम गर्न प्रयोग गरिन्छ र प्राकृतिक छ।
धेरै धन्यवाद म एलो कोशिश गर्नेछु। म उसलाई मर्ने अनुमति दिदिन तर म डराउँछु कि ऊ गलत निदान भयो र म आर्थिक रूपमा पशु चिकित्सकमा जान सक्दिन। मैले मौखिक रूपमा यिनीहरूको सिरिन्ज पनि सुई बिना प्रशासित गरें कि उनीहरूले मलाई पेटमा बल नलिन कोशिश गरे र मैले यो प्रबन्ध गरेपछि उनले १० सेकेन्डको लागि छींक गर्न थाले र म डराएँ। न त मलाई कारण थाहा छ। आउनुहोस् हामी अव्यानिडा डेल मेडिटेरिनो १ on मा पशु चिकित्सकले मेरो जिमेलमा जवाफ दिनेछ, मलाई उपचार गर्ने व्यक्तिहरू को हुन्, र केहि नर्स शिक्षकहरूले मेरो बिरालोको एक्स-रे कसरी जाँच गर्ने भनेर जान्दछन्, र भोलि उनी पनि हेर्न सक्छन् कि भनेर। दिसा लाग्छ वा मैले अर्को माइक्रलाक्स परिचय गर्दछु वा भोली होइन म म्याड्रिडको अर्को पशु चिकित्सकमा जान्छु, यद्यपि मलाई धेरै भरोसा हुँदैन।
र धेरै सन्देशहरूको लागि माफ गर्नुहोस्, तर ... मेरो बिरालोको लंगुरको लागि, म कसरी एलोवेरा र अधिक वा कममा कम्तीमा लागू गर्छु? मौखिक मार्ग, सम्पूर्ण खुट्टामा, प्याडमा,…?
अलिकता क्रीम राख्नुहोस्, सबै खुट्टामा।
नमस्कार, मेरो बिरालोले पञ्जा देखायो जब मैले मेरो ओछ्यानको सोफा खोलें र जब मैले त्यसलाई बन्द गरेँ मैले यो महसुस गरिन र उहाँको खुट्टा एक सेकेन्ड समातिए। ऊ घटनास्थलमा चिच्यायो तर म उसको खुट्टालाई छुन्छु र उसको जोर्नीहरू सार्दछु र ऊ गुनासो गर्दैन ... ऊ आफ्नो खुट्टामा छुरा बिना कता हिंड्छ, यो बिहान June जून २०१5हो। तर ऊ २ महिनाको हो र मलाई के थाहा छैन गर्नुहोस् किनभने मसँग पशु चिकित्सकका लागि पैसा छैन। मलाई थाहा छैन ... यदि ऊ गुनासो गर्दैन भने, के ऊसँग केही गम्भीर छैन वा मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ? मलाई थाहा छैन म के गरु…
यदि यो केवल एक सेकंडको सिद्धान्तमा म चिन्ता गर्दिन, यदि कम गुनासो गरेन भने कम।
अवश्य पनि, यदि तपाईले यो बिग्रँदो देख्नु भयो भने, म यसलाई सिफारिस गर्दछु।
धन्यवाद। यो days दिन को कुरा हो र म पहिले नै दौडिरहेको थियो र केही पनि छैन। हाहाहा
यो गरीब सबै भन्दा बढी डरायो।
त्यो राम्रोसँग जान्छ। धन्यवाद
यदि हामी तिनीहरूलाई धेरै hehehe माया
म खुसी छु यो केहि पनि थिएन -
शुभ - प्रभात। मेरो बिरालो days दिन अघि तेस्रो तलाबाट खसेको थियो, ऊ लme्गडो छ र चिच्याउने छैन तर ऊ सुधारिरहेको छ तर मैले उसको घाइते खुट्टामा एउटा बल देखेको छु, मलाई थाहा छैन उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान कि पर्खनु, म छु डर छ कि ऊ विघटित भएको छ र ऊ दुख्ने बानीमा पस्न सक्छ .. धेरै धेरै धन्यबाद।
केवल केस मा, म एक परीक्षणको लागि पशु चिकित्सक उनीहरु लिन सिफारिस गर्दछु। बढी छैन।
नमस्ते, म निराश छु किनकि मेरो to देखि month-महिनाको बिरालाले राति उनको पछाडिको समस्या थियो। उनी गाह्रो भएर हिंड्छिन्, धेरै गुनासो गर्छिन्, उठ्न गाह्रो भइरहेको छ, सुत्न र थोरै खाएको र धेरै पानी पिईएको छ। उहाँ सडकमा बाहिर जानुहुन्न र मलाई चिन्ता गर्ने सबैभन्दा कुरा यही हो कि यदि तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु। मलाई त्यस्तो पशु चिकित्सकमा लैजान स्रोतहरू छैन।
के यसमा खुट्टाहरू फुलेका छन् वा के यो ल l्गडो छ? यदि तपाईं सुन्नुभयो भने, तपाईं मवाद का फोडा हुन सक्छ, जो अन्ततः गायब हुनेछ; तर यदि होईन भने, यो हुन सक्छ कि एउटा प्रहार भयो, जुन सम्भवतः केहि दिनमा सुधार हुनेछ।
नमस्ते, मेरो बिरालाको खुट्टा सुन्न वा चोट लागेको छैन। मानिसहरूले मलाई भन्छन कि यो हिप डिस्प्लेसिया हो। म आशा गर्दछु कि यो त्यस्तो छैन।
धेरै युवा भएको कारण, म अत्यन्त शंका गर्दछु कि यो हिप डिस्प्लासिया हो, तर त्यो केवल एक पेशेवर द्वारा पुष्टि (वा अस्वीकार) हुन सक्छ। शुभकामना।
मेरो बिरालाको बच्चा दुबै खुट्टा पछाडि सर्दैन, मलाई मद्दत गर्नुहोस्, यदि तपाईं कृपया म के गर्न सक्छु?
तपाईलाई मेरुदण्ड, वा स्नायुमा चोट लागेको हुन सक्छ। यो पनि हुन सक्छ कि उसको रक्तक्षेपणबिना छोड्दै गएको चराहरूको स्तरमा महाधमनीमा थ्रोम्बी थियो।
जे भए पनि, पशुचिकित्सक हेर्न आवश्यक छ।
ब्रेन्डा डायज भन्यो
शुभ प्रभात, म कोलम्बियाको अति दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दैछु जहाँ कुनै प्रकारको चिकित्सा सहायता छैन।
र मैले cat जना बच्चाहरू सहित बिरालो भेट्टाँ जसमध्ये complete जना पूर्ण स्वास्थ्यमा थिए, आज सम्म म कसरी उनीहरू थिए भनेर हेर्न गएँ र मैले देखें कि एउटा बच्चाले पछाडिको खुट्टा झुण्डिरहेको थियो र प्रयोग गरिरहेको थिएन र पीडा देखाइरहेको थियो, के तपाईलाई थाहा छ? के गर्ने ? म यसको कदर गर्छु
ब्रेन्डा डायजलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं यसलाई गजसँग पट्टी गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि रिबन राख्नुहोस् जसले यसलाई नलगाउँदछ।
Valeria Enriquez de los Santos भन्यो
नमस्ते, मेरो--महिना पुरानो बिरालाको बच्चा एक मिटर र 3० सेन्टिमिटरको उचाइबाट खसेको थियो, स्पष्टतया उनी राम्रोसँग पसेकी थिइनन् र आफुलाई चार खुट्टाले समात्न सक्छिन्, उनले धेरै हेरिन्, र राम्ररी हिड्दिन, म। हताश, म के गर्न सक्छु जब तपाइँ उसलाई पशु चिकित्सकमा लगियो?
Valeria Enriquez de los Santos लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईले पट्टी पनि तान्न सक्नुहुन्न तर यो राम्रोसँग समायोजित हुन्छ। यदि तपाईंसँग एलोवेरा बिरुवाहरू, वा शुद्ध जेल छ भने, खुट्टा ब्यान्डि before गर्नुभन्दा पहिले, तपाईं यसलाई एक मालिश दिन सक्नुहुन्छ यस बोटको जेललाई पहिलो गन्धको साथ।
के तपाईले केहि चीजलाई काखमा राख्नु भएको छ यदि हेर्नु भयो? यदि त्यहाँ केहि छैन भने यो गठिया को शुरुवात हुन सक्छ। यो पुष्टि गर्न, म पशु चिकित्सकलाई लिन सिफारिस गर्दछु।
शर्ली सालाजार भन्यो
नमस्ते मोनिका, म धेरै चिन्तित छु किनभने मैले भर्खरै पत्ता लगाए कि मेरो बिरालोमा यसको बल छ। यसको छालामुनि पानीको झोला म के गर्छु, मलाई मद्दत गर्नुहोस्, कृपया?
शर्ली सालाजारलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। यो फोहोर भन्दा बढि केहि पनि हुन सक्दिन, तर यदि यो एक पेशेवर द्वारा जाँच गरिनु पर्छ।
माफ गर्नुहोस्, म तपाईंलाई अधिक मद्दत गर्न सक्दिन 🙁
हेर्नुहोस् यदि उनीहरूको प्याडमा एउटा स्पिलिटर वा गिलासमा केही अडकिएको छ भने। यदि तिनीहरूसँग केही छैन भने, उनीहरूसँग सम्भवतः मोच वा सानो फ्र्याक्चर छ।
दुई दिन दिनको लागि हेर्न को लागी तिनीहरू निको भयो, र यदि पशु चिकित्सकलाई लिनुहोस् तिनीहरूका खुट्टाहरूको जाँच गर्न।
अलेजेन्ड्रा रोड्रिगेज भन्यो
शुभ दिउँसो, मेरो बिहानको आधा बिरालोको बच्चा आज बिहान लंगडो थियो। म उसको खुट्टा छुन्छ र यसले थोरै दुखाइ दिन्छ, मैले देखें यदि उसले केही अडिएको छ र ऊसँग केही छैन भने, तर उसले अझै यसलाई समर्थन गर्दैन। मैले उसको पंजाको मालिश गरेको छु र कहिलेकाँही दुख्छ र कराउँछ। मैले यसमा तातो मलम राखेको छु; म धेरै चिन्तित छु। के तपाईंलाई थाहा छ मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ? वा मैले मलमको प्रभावको लागि कहिले सम्म पर्खनु पर्छ?
म धेरै चिन्तित छु र मलाई लाग्छ कि त्यो हो कि म उसको कुनै एक डेटामा बिरामी परें।
तपाईंको ध्यान को लागी धन्यवाद।
अलेजेन्ड्रा रोड्रिग्जलाई जवाफ दिनुहोस्
यति सानो छ कि यो पशु चिकित्सक मा उनलाई लिन सबै भन्दा राम्रो छ। यो केवल एक टक्कर हुन सक्छ, तर बढ्दो उमेर को भएकोले, यसलाई एक चोटि हेर्नका लागि यसले चोट पुर्याउँदैन।
मार्था सुआरेज भन्यो
शुभ दिउँसो, म सल्लाह लिन चाहन्छु, मसँग5महिनाको बिरालो छ, ऊ दाहिने खुट्टामा ल pain्गडो भयो, लimp्गडो भयो, मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें, उनीहरूले एक्स-रे लिए, नतिजा उनीसँग भएको थियो। हड्डी खुर्च्याउन अपरेट गर्न। मलाई थाहा छ मेरो बिरालोको शल्यक्रिया गर्दा त्यसले कस्तो नतिजा भोग्छ।
मार्था सुआरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्दैन यसको कुनै गम्भीर परिणाम हुन्छ 🙂। सामान्यतया, ती धेरै सतही स्क्र्यापहरू हुन्, जुन हड्डी आफै पुनः प्राप्त गर्नमा लामो समय लिदैन।
जे भए पनि, यदि तपाइँसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने पशु चिकित्सकलाई सोध्नुहोस्।
अभिवादन, र प्रोत्साहन, तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो केहि पनि हुनेछैन।
नमस्ते! उनीहरूले मेरो बिरालोमा line दिन अगाडि एउटा लाइन हालेका थिए उनीहरूले भने कि यो उसले पाउनु पर्ने अधिकतम हो, आज हामी यसलाई हटाउन चाहान्छौं किनकि त्यो दिन is हो र यसले टोक्छ, यसको कपाल धेरै टेपमा अडिग छ, हामी काट्न सक्छौं टेप तर अधिक, यो बाँकी छैन कि हामी यसलाई सँभाल्छौं। म कसरी हटाउनेछु ??? म उत्तरको लागि पर्खन्छु !!!!!!
नरम स्वरमा बोलेका शब्दहरूका साथ उसलाई आश्वासन दिन कोसिस गर्नुहोस्। तपाईं उसलाई बिरालाहरुमा केही उपचार दिन कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ - उसले पहिले नै ठोस खाना खान सक्छ - र यदि होईन भने म फेलीवे लाई विसारकमा राख्ने सिफारिस गर्दछु, किनकि यो उत्पादन हो जसले उसलाई शान्त रहन मद्दत गर्दछ।
बिरालालाई कम्बल वा तौलियामा लपेट्नुहोस्, बिस्तारै तर दृढताका साथ, ताकि यो लाइन सार्न सकिएन जब तपाईं रेखा हटाउनुहुँदा।
- एक दिन म स्कूल मा थियो र तिनीहरूले लगभग or वा months महिनाको पुरानो kit बिरालाको बच्चालाई त्यागेका थिए; तिनीहरूले पहिले नै दुई लिएका थिए तर एउटा मात्र बाँकी थियो। यो एक हप्ता र days दिन अघि भएको थियो जब एक मित्रले मलाई भन्यो कि जनावरहरू २ हप्ता वा त्यो भन्दा बढि तिनीहरूलाई स्कूलमा मार्छन्। म उनीप्रति अत्यन्तै दु: खी भएँ किनकि उनी सबैसँग अत्यन्त मायालु बिरालाको बच्चा थिए, त्यसैले म उसलाई घरमा ल्याएँ। छ दिन पछि, मैले टोबी नाम गरेको बिरालाको बच्चा एकदमै ध्वस्त रूखमा चढेको थियो र त्यसपछि कसरी तल झर्ने भनेर थाहा थिएन। मलाई के गर्ने थाहा थिएन तर त्यसपछि मलाई यो कम भयो भर्या। फेला पार्न यो भयो। स्पष्ट रूपमा म भर्या .मा खोज्न गएँ टोबी व्याकुल भयो र उसको आफ्नै खुट्टामा गयो र उसलाई आफ्नो खुट्टा भाँचियो। यो days दिन भएको छ सानो खुट्टा उठेको र झुण्डिए पछि, जब मैले महसुस गरें कि हड्डी साँच्चै भाँचिएको छ। म फार्मेसीमा गएँ र खुट्टा बाँध्न काठको दाउरा र ब्यान्ड किनें, वास्तवमा आज यो बाँधिएको थियो। अब मेरो प्रश्न यो हो, तपाई कहिलेसम्म ब्यान्ड अनको साथमा हुनुपर्दछ?
टोबी धेरै भाग्यशाली थियो कि तपाईंले उसलाई पाउनुभयो 🙂। बधाई छ।
जब तपाईले देख्नु भएको छ कि उसको खुट्टा जमिनमा राम्रोसँग समर्थित छ भने तपाईं पट्टि हटाउन सक्नुहुन्छ। यसले फ्र्याक्चरको गहनताका आधारमा केहि हप्तादेखि एक महिनासम्म लिन सक्दछ।
नमस्ते! शुभ बिहानी, मेरो बिरालाले दुई बिरालाको बच्चालाई साढे दुई साता अघि जन्म दिएका थिए, एउटा बिरालोको बच्चाले उसको खुट्टामा चोट पुर्‍याएको छ र यसमा झुण्डिएको छ र यसलाई सीधा बनाउँदैन, जसले उनलाई (अगाडिको खुट्टा) उठ्नबाट रोक्छ र सूजिएको देखिन्छ ... कृपया मलाई भन्नुहोस् म के गर्न सक्दछ किनकि मैले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुपर्दैन ...
लेखमा वर्णन गरिए अनुसार तपाईं यसलाई बेच्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ, पातलो काठको स्टिकहरू र गोज वा पट्टिहरू प्रयोग गरेर।
नमस्कार, मसँग week महिना पुरानो बिरालाको बच्चा छ एक हप्ता अघि उनी झ्यालबाट खसेकी थिइन… उनी भित्र पस्न जान्छिन्, उनी त्यहाँ थिइनन्। धेरै अग्लो तर लimp्गडो हुन थालि, ऊ दौडिन्छ र खान्छ र खान्छ र बाथरूममा पनि राम्रो गरी यदि उसले केहि गर्न सकिन, म पशु चिकित्सकमा जान्छु तर उनी भन्छिन् मलाई लाग्दैन कि यो फ्र्याक्चर हो किनभने अन्यथा। मलाई थाहा भएन, मैले उनलाई दुखाइको लागि औषधि दिएँ तर म उनलाई उस्तै देखाउँछु र यसले मलाई उस्तै देखेर दुःखी तुल्याउँछ र मसँग फेरि उसलाई फिर्ता लिनको लागि मसँग स्रोत छैन। उनीहरूले धेरै चार्ज गरे, मलाई भन के गर्ने। धन्यवाद
के तपाईले हेर्नु भएको छ कि यसले केहि अड्याएको छ वा खुट्टामा समातेको छ? म कल्पना गर्छु पशु चिकित्सकले उनलाई अहिले सम्म राम्रो हेराई गरेका छन्, तर मात्र केसमा।
जे भए पनि, यदि तपाइँ सामान्य जीवन बिताउनु हुन्छ भने, तपाइँसँग प्रायः मोच छ जुन स्वचालित रूपमा निको हुन्छ।
आशा छ, किनभने यसले मलाई दुखी बनाएको छ ऊ दौडिन र आफ्ना भाइहरूसँग खेल्छे जस्तो कि यदि उनीसँग मलाई केही छैन तर मलाई कुरूप लाग्छ। उसलाई यस्तो देखिन्छ तर यदि मैले उसलाई पहिले नै हप्काएँ भने पनि म फेरि उनको तकियामा फेरि राम्रो देख्नेछु… तर उसलाई छिट्टै निको हुन मद्दत गर्नु के राम्रो छ? एलो वेराको बारेमा उनीहरू के भन्छन् हेर्नुहोस्, के यो एलोवेरा स्लीमबाट प्राकृतिक हुनुपर्दछ कि किन्नुपर्दछ? र मलाई जवाफ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद!
एलोवेराले तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छ। यो प्राकृतिक वा खरिद गर्न सकिन्छ, जस्तो कि तपाई चाहानुहुन्छ।
साहस, तपाईंले कसरी यसलाई सुधार गर्ने देख्नुहुनेछ 🙂।
नमस्ते, मसँग लगभग २ महिनाको बिरालाको बच्चा छ र उनी सोफा खेल्दै गइन्, उनी गुनासो गर्छिन् जब तपाईं उनको पंजा छुनुहुन्छ र उनी अलि अलि बढी सुतेर, धेरै निदाउँछिन् र कम खाइन्।
तपाईं यसलाई दुई पातलो काठको लौरो र पट्टिहरू प्रयोग गरेर होसियारीपूर्वक पट्टी गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, यो आदर्श रूपमा पशु चिकित्सकले देख्नु पर्छ।
नमस्कार, म कार्मेन हुँ, दुई महिनाको बिरालाको बच्चासँगै म एक हुँ, दाहिने पछाडिको पीडा र लimp्गडाहरूलाई अगाडि दायाँ भयो र उसलाई हिंड्न धेरै गाह्रो भयो र सबै आपतकालीन पशु चिकित्सकहरू धेरै महँगो छन्
मलाई थाहा छैन म के गरु
मलाई माफ गर्नुहोस् कि तपाईंको किट्टी खराब हुँदै गयो 🙁
तर उनी पशु चिकित्सकले हेर्नुपर्दछ। म पशुचिकित्सक होइन, र मलाई थाहा छैन कि उनले के भइरहेको छ।
नमस्ते, मेरो बिरालो लimp्गडो छ तर यो लाग्छ कि अर्को बिरालोले आफ्नो पछाडिको डल्ला खान्छ, ऊ गुनासो गर्दैन, ऊ सामान्यतया हिँड्छ तर उसले मलाई आफ्नो पंजा देखाउँदैन, ऊ रिसाउँछ, म के गर्न सक्छु?
यदि ऊ सामान्य हिड्छ भने, ऊ कसरी विकसित हुन्छ भनेर भोलि पर्खनुहोस्। प्रायः, यो आफ्नै फिर्ता हुनेछ।
यदि पछि तपाईले देख्नु भयो कि उहाँ शान्त हुनुहुन्छ भने तपाईले घाउमा थोरै हाइड्रोजन पेरोक्साइड राख्ने विचार गर्न सक्नुहुनेछ।
हो, मैले गरे, धन्यवाद मोनिका, यस्तो देखिन्छ कि ऊ राम्रो छ र यदि ऊ पनि निको हुन्छ, तर जब ऊ सुतिरहेछ, म उनलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइडले सफा गर्ने फाइदा लिन्छु
त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। म धेरै खुसी छु कि उसले improving सुधार गरिरहेको छ
के तपाईंलाई थाहा छ यदि उसले टक्कर लिएको छ वा खराब पतन भएको छ? के कसैले यसमा पाइला टेकेको छ?
यदि तपाईले देख्नु भयो कि ऊ गुनासो गर्दैन, कि अधिक होईन, र सामान्य जीवन बिताउँदैन, सिद्धान्तमा म तिमीलाई भन्दछु कि उसले आफैंलाई निको पार्छ। तर यदि उसले धेरै गुनासो गरेको छ र घाउको खुट्टा प्रयोग गर्न चाहँदैन भने, त्यसोभए यो सम्भव छ कि उसले यसलाई भract्ग गर्यो, त्यसैले तपाईले पट्टी बाँध्न सक्नुहुनेछ, वा राम्रोले यसलाई परिक्षणको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
नमस्कार, मेरो बिरालोको बच्चा अनौंठो छ, आज दिउँसोदेखि उनीसँग यस्तो मुद्रा रहेको छ मानौं यो पोपको बारेमा हो, उनी यस्तै हिंड्छिन् र यसले कुनै चोट पुग्दैन, ऊ पाइलामा चढ्न वा राम्रोसँग तल जान सक्दैन, ऊ आफ्नो पछाडि खुट्टाले गर्न सक्दैन। , उनी कब्जमा पर्न सक्छिन्, उनी करीव दश बर्षको भयो
यो हुन सक्छ कि उनी वास्तवमै कब्जिएका थिए। यसलाई सिरकाको सानो चम्मच दिने प्रयास गर्नुहोस्। यो तपाईं मद्दत गर्नेछ
तर यदि hours 48 घण्टा बित्यो र यो गर्न सकिदैन, वा यदि यो बिग्रियो भने तपाईंले पशु चिकित्सक देख्नु पर्छ।
मेरो बिरालो (मलाई कुन कारणले थाहा छैन) दायाँ अगाडिको खुट्टा समात्न थाल्छ, यसले यसलाई समर्थन गर्दैन, तर जब यो कतै उफ्रँदै जान्छ कि बल छ भने म यो धेरै समर्थन गर्न कोशिस गर्दैनु, यो सामान्यतया ती ठाउँहरूमा जान्छ जुन यो एकदम उच्च हुँदैन (टेबुल, सि ...्क ...) के त्यहाँबाट उफ्रनु चोट पुग्छ कि? के म उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान्छु वा मेरो लागि कुर्दै ..? किनकि उसले भर्खरै आज कम गर्न शुरू गर्यो, ०१-१०-१। बिहान
Meel लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं सुधार गर्न को लागी केहि दिन पर्खन सक्नुहुन्छ। साना टक्करहरू अक्सर दिइन्छन् कि आफैंमा उपचार समाप्त हुन्छ।
अवश्य पनि, यदि hours 48 घण्टामा सुधार भएन भने म यसलाई पशु चिकित्सकमा लिन सिफारिस गर्दछु।
जोनाथन फर्नान्डो भन्यो
नमस्कार, मेरो बिरालो एक खुट्टामा लme्गडो छ तर मलाई लाग्छ ऊ उसको निजी भागमा पनि घाइते भएको छ किनकि उसले निरीक्षण गर्यो कि उसको रगतबाट केही रगत बाहिर आउँछ र त्यसले धेरै पीडा दिन्छ र ऊ खान वा पिउन चाहन्न जुन म गर्न सक्छु।
जोनाथन फर्नान्डोलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो सल्लाह तपाईले पशु चिकित्सकलाई लैजानुहुन्छ। मलाई थाहा छ म आफैंलाई धेरै पटक दोहोर्याउन सक्छु, तर जब बिरालाबाट रक्तस्राव हुन्छ, जब यो खाँदैन वा पिउँदैन, यसले धेरै दु: ख भोगिरहेको छ र पेशेवरले जाँच गर्न आवश्यक छ, अन्यथा यसको जीवन खतरामा पर्न सक्छ।
धेरै, धेरै प्रोत्साहन, वास्तवमै। आशा छ यो छिट्टै नै राम्रो हुन्छ।
नमस्कार, तपाइँको लेख को लागी धन्यवाद। मेरो समस्या यो हो कि मेरो बिरालोलाई निको पार्न सकिदैन। अगाडिको पजा केहि महिनाको लागि घाइते भएको छ, विशेष रूपमा, यसको औंलामा प्याड छैन र अगाडि केहि छेउमा केही चोटपटक लागेको छ। हामीले यसमा हाइड्रोजन पेरोक्साइड राख्ने कोसिस गरेका छौं, परभिनोक्स, एक विशेष क्रीम जुन पशु चिकित्सकले हामीलाई दिएको छ र त्यसले यसलाई अझ छिट्टै निको पार्छ, तर समस्या यो हो कि एक पटक उसले महसुस गर्यो कि हामीले उसमा केही तरल लगायौं, ऊ बाहिर जान्छ र बाहिर फर्कन्छ। तब ऊ फर्केर आउँदछ, तर हामी उपचार जारी राख्न सक्दैनौं, किनकि ऊ घाइते पंजा चाट्छ, जसले उसलाई कहिल्यै निको पार्दैन। एक दिन हामीले उसलाई केहि बूँदाहरू दिएर थोरै मात्रामा कम गर्‍यो र उसले त्यस दिनको लागि उसको खुट्टामा च .्गाइ दिन अनुमति दियो, तर त्यो पटक्कै मन परेन, अझै पनि बेहोस र सबै कुरा। हामी पनि पशु चिकित्सकलाई औषधीको लागि सोध्छौं, तर ऊ केवल सन्तुलित खाना खान्छ, र उसले गोलीको बिटहरू के हो याद गर्दछ र तिनीहरूलाई चकमा पार्छ। यो व्यावहारिक रूपमा मासु वा अरू केहि खानको बारेमा होइन। यदि मैले उसलाई गोलीको केही टुक्राको साथ अलिक मासु खान सक्ने भयो भने यो यो हो। अर्को दिन ऊ अब चाहँदैन।
यो धेरै नै जटिल छ किनकि केही गर्न अनुमति छैन। म कुनै सुझावलाई कदर गर्छु।
मलाई यस्तो देखिन्छ कि हुनसक्छ तपाईं यसलाई हल्का रूपमा तर दृढ रूपमा लिन सक्नुहुनेछ, यसलाई तौलियाले लपेट्नुहोस् (नराम्रो खुट्टा बाहेक), र घावलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड वा बेटाडाइनले सफा गर्नुहोस् र यसलाई कडा पट्टीले लपेट्नुहोस्, तर चोट नपारिकनै।
पट्टी हटाउनबाट रोक्नको लागि, र यदि यो बाहिर जान नपरोस् भने, तपाईं यसमा एक Elizabethan कलर राख्न सक्नुहुन्छ जब सम्म यो निको हुँदैन।
तपाईलाई यो कुनै पनि हालतमा मनपर्दैन र तपाई अत्यन्त असहज महसुस गर्नुहुनेछ, तर यस तरीकाले सानो खुट्टा ठीक हुन सक्छ।
माफ गर्नुहोस् तिनीहरूले तपाईंको किट्टीलाई के गरे त्यसका लागि दु: खी छु, तर म कुनै औषधी सिफारिस गर्न सक्दिन किनकि म पशु चिकित्सक होइन।
मेरो सिफारिश छ कि तपाइँ उपचारको लागि एक विशेषज्ञ लाई यो लिन।
Itzel Diaz भन्यो
नमस्कार मेरो डेढ वर्ष पुरानो बिरालामा चोट लागेको पंजा छ, उसले आफूलाई छुने छैन, उसले खान चाहँदैन, उसले थोरै मात्र खायो जब म उसलाई खानेकुरा लिएर आएँ र ऊ सुत्न चाहन्छ । मलाई थाहा छैन कि कसरी जाँच गर्ने वा के गर्ने।
Itzel Díaz लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले भर्खर याद गरें कि हुन सक्छ उसलाई काट्यो (उनी थोरै साहसी छन्), त्यसमा थोरै प्वाल छ, र उसले स्पष्टतः पूस छ। के गर्न सल्लाह दिइन्छ?
यसलाई लिने प्रयास गर्नुहोस् र यसलाई तौलियाले बेर्नुहोस्, नराम्रो खुट्टा बाहेक, र हाइड्रोजन पेरोक्साइडले घाउलाई सफा गर्नुहोस्। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, betadine -in फार्मेसीहरू प्राप्त गर्न कोसिस गर्नुहोस्।
उसलाई खानको लागि, उसलाई भिजेको फिड दिने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यो अधिक गन्धको छ र यसले सुक्खा फिड भन्दा बढी आकर्षित गर्दछ।
यदि यो सुधार हुँदैन भने, वा यदि यो बिग्रँदो छ भने, मेरो सल्लाह हो कि तपाईं यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् यो जाँच गर्न। मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ केहि गम्भीर छ, तर विशेषज्ञको भ्रमणले चोट पुर्‍याउँदैन।
अभिवादन, र खुशी!
नमस्कार, मँ यस पृष्ठमा आएको कुरा भेट्न आएको हुँ जसले मेरो लागि काम गर्दछ, मेरो बिरालोको बच्चा अलि अलि हिंडिरहेको बेला, ऊसँग कुनै ठूलो चर्को आवाज छैन, तर मलाई लाग्छ यो उनको दाहिने फ्रन्ट पंजाको समर्थन गर्न दुख्छ। मैले पहिले नै यो जाँच गरें तर म केहि पनि फेला पार्न सक्दिन, तर जब मैले यसको पञ्जा छुन्छ, यसले गुनासो गर्न थाल्छ र एक पटक यो मलाई टोक्ने र कोर्न चाहान्थ्यो। म यसको कारण यसलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्दिन। के यसलाई चाँडै पशु चिकित्सकमा लैजान आवश्यक छ?
तपाईले जे गणना गर्नु हुन्छ त्यसबाट यो गम्भीर देखिदैन। मेरो सुझाव छ कि तपाइँ केही दिन पर्खनुहोस्, किनकि हुनसक्छ तपाईंले नराम्रो पतन गर्नुभयो वा केही हिट गर्नुभयो।
तर यदि यो सुधार हुँदैन, वा यदि यो बिग्रन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले पशु चिकित्सकलाई हेर्नु पर्छ, किनभने यसको मोच हुन सक्छ।
मार्गजी गिरोन भन्यो
नमस्ते, मसँग एउटा बिरालोको बच्चा छ कि बिहान कहिँ पनि उसको दाहिने पछाडिको पञ्जाले ल l्गडो हुन थाल्यो र यसले धेरै पीडा ल्यायो किनभने ऊ उभिन सक्दिन र धेरै गुनासो गर्‍यो, मैले उनलाई पहिले नै जाँच गरें र उनीसँग उनको पंजामा केही छैन, उनी हुन्। मुश्किल5महिना पुरानो, कृपया मलाई उत्तर दिनुहोस्, मलाई के गर्ने थाहा छैन।
मार्गी गिरोनलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं हिट वा एक खराब पतन हुन सक्छ।
मेरो सल्लाह पशु चिकित्सकलाई लिन को लागी छ। यदि तपाईंले धेरै गुनासो गर्नुभयो भने यो हो किनकि यसले धेरै चोट पुग्छ, र पाँच महिनाको उमेर भएमा, चाँडो कार्य गर्नु राम्रो हुन्छ ताकि तपाईं सकेसम्म चाँडो निको हुन सक्नुहुन्छ।
आना दुराजो भन्यो
मेरो बिरालाको बच्चा, जो केवल एक बर्षको उमेरको हुने छ, रातभरि नै बसिरहेकी थिई (उनी मेरो घर भित्र बस्छिन्) र बिहान उनी भित्र पसीन् उनि एकदम फूली पाउ थियो, तपाईले कुनै खरोंच देख्न सक्नुहुन्न र उनले त्यसलाई सार्न सक्छिन्। तर मलाई थाहा छैन उनी केमा गलत छ। म गर्न सक्दछु
Ana Durazo लाई जवाफ दिनुहोस्
सबै भन्दा सल्लाहकार चीज यो जाँच गर्न पशु चिकित्सक लिनु हो।
नमस्कार, शुभ अपहर, मेरो नाम गेनेसिस हो, म तिमीलाई भेनेजुएलाबाट लेख्दैछु। म धेरै चिन्तित छु। मसँग एउटा बिरालाको बच्चा छ जुन लगभग months महिना पुरानो छ र मैले हिसाब गरेको हिसाबले मैले उनलाई सडकबाट उठेको थिएँ जब उनी केवल एक बच्चा थिए। समस्या यो हो कि आज करीव hours घण्टा पहिले मेरो प्रेमीले यो फ्याँक्यो किनभने ऊ खाँदै गर्दा ऊ रिसाउँथ्यो र त्यस बाटोमा उसले उसको एक पछाडिको खुट्टामा चोट पुर्यायो, मैले याद गरे कि बिरालोको बच्चाले अलि-अ l्ग लंगडो पारे, तर घण्टा बित्दै जाँदा म उनी देख्न सक्छिन् कि उनी अझै पनी एकातिर थिइनन्, र जब उनी बसिन् उनी केही हदसम्म काँपिरहेकी थिइन्, मानौं कि उनी निराश छिन् र उनी मलाई भेट्न आए र मलाई बिटारे, मलाई थाहा छैन कि उनी अचानक गर्भवती छिन् कि भनेर। र प्रहारको साथ मैले उनलाई असर गरें। किनभने उसको पेट अलि भारी छ। वा यो अरू केहिसँग गर्नुपर्दछ, म धेरै चिन्तित छु, यस समयमा उनी सुतिरहेकी छिन् तर जब उनी उठ्छन् मानौं ऊ मातेको थियो वा त्यस्तै केही थियो ... मैले उनलाई यस्तै देखे पछि म धेरै रोएको छु। , म उसलाई मर्न चाहन्न। कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? अहिल्यै म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान सक्दिन किनभने उनीहरूले निश्चित समय सम्म काम गरेको धेरै ढिलो भइसक्यो, तर यो आइतवार हो। म तपाइँको शीघ्र जवाफको लागि पर्खिरहेको छु!
तिम्रो बिरालोको बच्चा कस्तो गर्दैछ? मलाई आशा छ यो सुधार हुँदैछ।
यदि होईन भने तपाईंले उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। तपाईंसँग फ्र्याक्चर वा नराम्रो हुन सक्छ।
नमस्कार, यदि आज मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगेको थिएँ, डाले मलाई भने कि उनी विषाक्तिका लक्षणहरू जस्तै थिए, किनभने बिस्तारिएका विद्यार्थीहरू र। त्यसकारण मैले उनलाई एउटा ईन्जेक्शन दिएँ, उनले मलाई भने कि अलि अलि उसको आँखा सामान्यमा फर्किनुपर्‍यो किनभने उनी निराश भइन् कि जस्तो देखिन् कि उनीले केहि देखिनन्, म पहिले नै उनलाई घरमा नै छु, उनी अलि शान्त र कम छिन् आक्रामक, उनले खाइसक्यो र दुध पिएकी छ, यद्यपि उनका विद्यार्थीहरू अझै बाँधिएका छन् र ऊ अझै राम्ररी हिंड्न वा स्थिर रहन सक्दैन। यो केहि अरु हुन सक्छ? मलाई केहि अन्य विचारहरू चाहिन्छ जुन मलाई मद्दत गर्न सक्दछु म चिन्तित छु कि उसको आँखाहरू पनि यस्तै छन् र हिँड्नको लागि ऊ आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न सक्दैन।
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालो अझै कमजोर छ, तर म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दिन। म पशु चिकित्सक होइन।
के म सिफारिश गर्दछु उसको दूध नदिनु, किनभने यसले उनलाई नराम्रो महसुस गराउन सक्छ र उसलाई अझ नराम्रो बनाउन सक्छ।
धेरै प्रोत्साहन। कहिलेकाँही तिनीहरू सुधार गर्न केहि समय लिन्छन्।
हेलो, ठीक छ, मसँग मेरो घरमा सुतिरहेको बिरालो छ र राती ऊ हिंड्न बाहिर जान्छ र केहि दिन अघि मैले थाहा पाएँ कि ऊ एउटा खुट्टामा ल l्गडो छ, म उसलाई हेर्छु र मैले कुनै अनौंठो देखिन म उसको पंजा पट्टी गर्न सक्दछु, तर लोको निश्चित छ कि रात छ भने ऊ बाहिर जान चाहन्छ र ब्यान्डिज गरिएको खुट्टाको साथ ऊ कमजोर हुन सक्छ, म त्यसलाई पट्टी बाँध्न लागिरहेको छु र केहि दिनको लागि बाहिर जान नदिनुहोस् तर यो धेरै हुन्छ भारी यदि मैले उसलाई बाहिर निकाल्न दिएन भने उसले ननस्टपको लागि आउँदछ र मलाई के गर्ने थाहा छैन, तपाईं मलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ, धन्यवाद, अभिवादन मि्रक्स
सबै भन्दा राम्रो कुरा गर्न को लागी यसलाई बेच्न र यसलाई केही दिन को लागी घरमा राख्नु पर्छ। तर यो सत्य हो कि बाहिर जान चाहान्ने बिरालोलाई जटिल बनाएको छ। के उसले सामान्य जीवन बिताउँछ? यो केवल एक सानो टक्कर लिन र यसको आफ्नै लाग्न सक्छ।
जे भए पनि, यदि तपाईले देख्नुहुन्छ कि यो खराब हुँदै जान्छ भने, यसलाई जाँच गर्न पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
सबैलाई नमस्कार, मसँग एक हप्ता पुरानो बिरालाको बच्चा छ, him दिन अघि मैले उसलाई हेरेँ र उसको पछाडिको पौंलो फुलिएको छ, ऊ तान्न वा सार्न सक्दैन र ऊ पीडाबाट रोइरहेको छ, म के गर्न सक्छु?
Ima980 लाई जवाफ दिनुहोस्
यति सानो हुनु नै उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु राम्रो हुन्छ, किनकि उसको हड्डीहरू एकदम कमजोर हुन्छन् र कुनै गलत चालले उसको दुखाइ बिगार्न सक्छ।
नमस्कार, आज दिउँसो मेरो बच्चाको बच्चाले सतामा मैले सडकमा फेला पारेको पलंगबाट उफ्रियो र चुप लाग्यो। त्यो झर्ने पछाडि ऊ धेरै लimp्गडो हुन्छ र उसको पछाडिको खुट्टा उसको पुच्छर शेकको छेउमा ... यदि तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि यो के हो। म यसको धेरै कदर गर्छु .. अभिवादन
उसकोमा मोच वा फ्र्याक्चर हुन सक्छ, तर खुट्टाको एक्स-रे बिना तपाईं भन्न सक्नुहुन्न, मलाई माफ गर्नुहोस्।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तिमी उसलाई पशु चिकित्सकमा जाँच्न उसलाई जाँच्नको लागि।
सारा ramirez भन्यो
नमस्ते, मेरो बिरालो ल la्गडो छ, सूजिएको छ, म के गर्ने?
सारा ramirez लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि यो फूलिएको छ भने, यो राम्रो छ कि तपाइँ यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्, किनकि यदि तपाइँले यसलाई पट्ट्याउने प्रयास गर्नुभयो भने, यसले धेरै पीडा भोग्नुपर्दछ।
मेरो बिराला घरको अगाडि खेलिरहेको थियो जब छिमेकी कारमा आए र सीटी बजाएन र बिरालो समय मा टाढा जान सक्षम थिएन, मेरो सानो बिरालो लिम्प्स र जब मैले पसलको नजिक उसलाई पुकार्ने कोसिस गरेको छु उस्को बारेमा गुनासो छ घटनाको समयमा उसले मलाई पशु चिकित्सकमा लैजान सक्दैन, मलाई के गर्ने थाहा छैन, यसले धेरै चोट पुर्‍याउँछ, ऊ एकदम चंचल बिराला हो, ऊ आफ्नो देब्रे तिर झुकाउन नसक्दा पीडित छ, के मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान पर्खँदा के म गर्न सक्छु?
खारीनालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते म शनिबार मेरो बिरालोको बारेमा चिन्तित छु म उसलाई खोप लगाउन गएँ र ऊ डरायो, ऊ भाग्यो र मैले कारमा उनलाई5ब्लकमा लखेटें पछि उनी रोके र एउटा ट्रकमा लुकाए म उनलाई बाहिर ल्याउन सक्छु र उसलाई घर फर्कन सक्छु। ऊ साह्रै दु: खी छ र उसलाई हिंड्न गाह्रो छ र उसलाई कुर्सी चढ्न धेरै गाह्रो छ। मलाई लाग्दैन कि यो केहि हड्डी हो किनकि नौ खुट्टाहरूसँग सुत्ने म राम्रोसँग सोच्छु कि यो प्याडहरू हुन सक्छ किनकि यसले तिनीहरूलाई चाट्यो तर म के गर्न सक्दिन मलाई थाहा छ।
के तपाईंले कुनै चोटपटक वा प्याडमा छिरेका चीजहरूको खोजी गर्नुभयो?
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाइँ उसलाई एक परीक्षाको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। सम्भवतः यो केहि गम्भीर छैन, तर यसले एक चोटि हेरी चोट पुर्‍याउँदैन।
स्यान्ड्रा रामोस भन्यो
नमस्कार, शुभप्रभात, आज जब म ब्यूँझें मैले आफ्नो बिरालोको एउटा फुलिएको पञ्जाले देखें जब मैले यो जाँच गरें भने मैले एउटा धेरै कडा धागो भेट्टाए, मैले यसलाई पहिले नै हटाइसकेको छु, उनको पजा अझै सुगन्धित छ, कसरी म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु?
Sandra ramos लाई जवाफ दिनुहोस्
एक पटक थ्रेड हटाइए पछि, खुट्टा आफैंमा निको पार्नु पर्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं यसमा केही एलोवेरा क्रीम राख्न सक्नुहुन्छ।
यदि यो सुधार हुँदैन भने, यसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्, तर मलाई लाग्दैन कि यो केहि गम्भीर छ।
नमस्ते, म जोन हुँ, मलाई समस्या छ, मेरो बिराला झन्डै एक बर्षको भयो र उसले लम्प्स पारेको छ, उसको खुट्टामा औंला छ जुन उठेको वा झुकाइएको छ। दुख्छ र मलाई के गर्ने थाहा छैन। केही सल्लाह।
लेखमा वर्णन गरिए अनुसार तपाईं यसलाई बेच्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि यसले धेरै चोट पुग्छ भने उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु उत्तम हुन्छ।
नमस्ते, मेरो बिरालो, मलाई थाहा छैन उसलाई के भयो तर ऊ धेरै लंगडो हुन्छिन् र कराउँछिन्, मलाई के गर्ने वा के उसले थाहा छैन, हामीले उसको खुट्टामा कम्मर कस्नुभयो र मलमपट्टी हटाइदिए।
Trinidad लाई जवाफ दिनुहोस्
हुनसक्छ यो कतैबाट खसेको छ र यसको खुट्टा भाँचिएको छ।
यदि यो अझै दुख्छ भने, तपाइँ यो पशु चिकित्सक मा लिनु पर्छ।
मसँग एउटा बिरालो छ जुन केहि दिन अघि एउटा खुट्टामा लimp्गडो हिर्काउन थाल्यो र हामी उनलाई पशु चिकित्सकमा लग्यौं तर उनले कुनै गम्भीर कुरा देखेनन्, उनले आराम गरेन भनेनन् र उनले विरोधी भडकाउने सल्लाह दिए। जब हामी घर पुग्‍यौं बिरालो अपाimp्ग भएन तर आज फेरि सुरु भयो तर अर्को खुट्टाको अगाडि। उहाँ years बर्षको हुनुहुन्छ, तपाईंलाई केहि थाहा छ यो के हुन सक्छ? यसले दुखाइको आवाज वा केहि पनि बनाउँदैन यसले खुट्टालाई राम्रोसँग समर्थन गर्न रोक्दछ।
के तपाईले हेर्नु भएको छ कि खुट्टामा केहि पनि छ (प्याडमा मात्र होइन, तर अंगमा पनि) जुन अड्किन्छ? कहिलेकाँही तिनीहरू सुक्खा घाँसको सानो टुक्रा यसमा अड्कन्छन् र यसलाई धेरै कष्टप्रद पाउँछन्।
वा हुनसक्छ त्यहाँ हिट भएको छ।
यदि तपाईं सामान्य जीवन बिताउनु हुन्छ भने, यो गम्भीर जस्तो लाग्दैन। केही दिन थप जान दिनुहोस् र यदि तपाईंले देख्नु भयो कि यसले सुधार गर्दैन भने, यसलाई फेरि फिर्ता लिनुहोस्।
नमस्ते, मेरो बिरालाको बच्चाले उसको पछाडि पसिनामा रसमिलोन बनाई, ऊ ल l्गडो हुन्छ तर सबै सामान्य गर्दछ, यद्यपि यदि उसले गुनासो गर्छ यदि मैले उसको घाउलाई हेर्छु तर रगत छैन भने, मैले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंसँग केहि पनि छैन र तपाईं धेरै बढि विफल हुनुहुन्न, यस्तो सम्भावना हुन्छ कि यो आफैंमा निको हुनेछ।
अवश्य पनि, यदि तपाईं देख्नुहुन्छ कि यो बिग्रन्छ भने, यसलाई पशु चिकित्सकमा लिनुहोस् यसलाई जाँच्न।
नमस्कार मोनिका, मेरो काछौंको छेउछाउमा शाब्दिक रूपबाट टिप बाहिर आयो र चौडाइ पछाडि, मलाई लाग्छ कि यो केवल छाला मात्र हो किनकि अब हिंड्न सक्ने छ कि यसले यसलाई काट्छ, तर मलाई डर छ कि काँडाको छेउमा छ भित्र रहनुभयो, के यो धेरै गम्भीर छ वा तपाईंको छाला अन्ततः यसलाई बाहिर निकाल्छ?
-मैले यसमा मदिरा राखीदिएँ ताकि यसले स infected्क्रमित हुने थिएन
उत्तरहरू लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि समयको साथ मात्र एउटा सानो टुक्रा मात्र बाँकी छ भने शरीर आफैंले यसलाई बाहिर निकाल्छ। यो यस्तो छ कि जब एक क्याक्टस काँडाले हामीमा फँस्यो कि हामीलाई बाहिर निकाल्ने कुनै उपाय छैन। अन्तमा यो बाहिर आउँछ समाप्त हुन्छ।
जे भए पनि, यदि तपाईले देख्नुहुन्छ कि यो कुरूप हुन्छ वा खराब गन्ध आउँछ भने, पशु चिकित्सकमा लैजान नहिचकिचाउनुहोस्।
नमस्कार !! हामी सडकमा एक सानो बिरालाको बच्चा पाउँछौं जसले ल l्गडो पार्छ र बन्द गर्न छोड्दैन, हामी खाना र पानी नाप्छौं; खाए र शान्त भयो, कहिले खेल्छ तर रोक्छ र रुन्छ, यो फ्र्याक्चर हो?
Yeidy लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई फ्र्याक्चर हुन सक्छ, तर एक पशु चिकित्सकले मात्र यसलाई एक्स-रेले पुष्टि गर्न सक्दछ।
यदि उसले पजलाई समर्थन गर्दैन भने, मेरो सल्लाह तपाईले पशु चिकित्सकलाई लैजानुहोस्। अब, यदि तपाइँ उसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र तपाईले देख्नुहुन्छ कि उनले अधिक वा कम सामान्य जीवन बिताउँछ, तपाईले त्यसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ लेखमा वर्णन गरे अनुसार।
मेरो बिरालाको बच्चा मेरो बुबाको कारको मुनि गए, र मेरो बुवालाई आपतकालिन थियो, तर उसले याद गरेन कि बिरालोको बच्चा टायर पछाडि थियो र मेरो बुवाले कार सुरू गर्नुभयो, यसलाई सार्नुभयो, र टायरको साथ यसको पंजामा लाग्नुभयो, बिरालो लिम्प्सको, किनकि उनी केवल उनको पंजाको प्याडमा पाइन्छन् र दुख्छ, र त्यो यसलाई तान्न चाहँदैन, ऊ मेरो छेउमा बसिरहेकी छिन्।
तपाईलाई चोट पुगेको छ?
यदि तपाईं यसलाई फैलाउन चाहनुहुन्न भने, तपाईंसँग फ्र्याक्चर हुन सक्छ।
एक एक्स-रे ले यो पुष्टि गर्न सक्दछ।
धेरै धन्यवाद !!!
ऊ पहिले नै निको भइरहेको छ।
म खुशी छु 🙂
उसको खुट्टामा नुनको पानी राख्नुहोस्, उसको पञ्जा भाँचिन सक्छ, पट्टी उसलाई लगाउनुहोस्, र पट्टीको शीर्षमा र पट्टीको शीर्ष भागमा हरेक रात नुनको पानी राख्नुहोस्।
म आशा गर्दछु कि तपाईंको बिल्लीको बच्चा ठीक छ, यदि उनी सुधार भएन भने, उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
मेरो नाम एमिल्स् हो, मेरो बिरालोको पिटाईमा चोट लागेको छ, उसको पञ्जा सुलेको छ र ऊ लंगडो छ, के म तलको भाग त सक्दिन तर मैले गरेको हातको अंश?
Emilse लाई जवाफ दिनुहोस्
लेखमा वर्णन गरे अनुसार तपाईले उनीलाई यो पट्टि बेच्न सक्नुहुनेछ।
यदि यो सुधारिएको छैन भने, म पशु चिकित्सकमा लिन सिफारिस गर्दछु।
हो, तपाईं यसलाई ध्यानपूर्वक बेच्न सक्नुहुन्छ। तर यदि उसले धेरै गुनासो गरेमा पशुचिकित्सकले गर्नु बेस हुन्छ किनभने उसले फ्र्याक्चर गरेको हुन सक्छ।
तिनीहरूले मेरो बिरालोलाई राम्ररी हेर्यो र त्यसबेलादेखि ऊ पछिल्तिरको दाहिने खुट्टाबाट लimp्ग्यो मैले उसलाई नूनको पानी हालेको छु र ऊ सुधारदैन, म पहिले नै पशु चिकित्सकको अगाडि गएँ र ऊ भन्छु कि ऊ निको हुनेछ, २० दिन बितिसकेको छ र ऊ सुधार भएको छैन
यो तपाईको कुरामा हास्यास्पद छ। यो हुन सक्छ कि हस्तक्षेपको समयमा एक स्नायु घाइते भएको छ। समय मा यो आफैले निको पार्नु पर्छ, तर म सिफारिश गर्दछ दोस्रो पशु चिकित्सा राय।
पिट्रा सान्ता कोरल सिन्थिया xymena भन्यो
नमस्कार राम्रो, एक दिन म उठे र मेरो बिरालोको ल l्गडो थियो तर उनी हिंडिरहेकी थिईन् उनको सानो चोट लागेको थियो, हामीले उनलाई बेवास्ता गर्यौं तर समय बित्दै जाँदा हामीले देख्यौं कि उनी अधिक लंगडाईरहेकी थिईन् र उनको खुट्टामा धेरै घिसारिएको छ र हामी अहिले नुहायौं। र घाउलाई कीटाणुरहित गरे र हामीले उनको मेवावामा पट्टी लगायौं तपाईले सिफारिस गर्नुहुन्छ?
Pietra santa Corral Cynthia xymena जवाफ दिनुहोस्
म सुझाव दिन्छु कि यो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्, र अधिक यदि यो घाउ हो भने जुन केही दिन अघि बनाइएको थियो।
नमस्ते, मेरो बिरालाको बच्चा अगाडिको पञ्जाबाट लimp्गडो भयो, उनको पञ्जा सूजीएको छ तर शीर्षमा, मलाई डर छ यो फ्र्याक्चर हुन सक्छ, उनी गुनासो गर्दिनन्, तर जब उसले उनलाई छुने कोसिस गर्दा उनी पञ्जालाई टाढा सार्छिन्। , यो के हुन सक्छ?
यो फ्र्याक्चर हुन सक्छ, तपाईले भन्नु भए जस्तै। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उनलाई डाक्टरलाई लिएर एक्स-रे गरियोस् र तपाईंलाई के गर्नुपर्छ बताउनुहोस्।
जुडिट मिराज ज़ोरिला भन्यो
मेरो बिरालो बाहिर जान्छ र आज बिहान अलि लम्प पारेको छ, अब यो बढि फुलेको छ तर छोएको छ र मैले कुहिनोमा पानीको बल जस्तो लम्प मात्र देख्छु। यो भ broken्ग हुनेछ?
Judit Miraz Zorrilla लाई जवाफ दिनुहोस्
उसले आफैंलाई हिर्काएको हुन सक्छ, तर यो अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ कि तपाईले एक एक्स-रे को लागी पशु चिकित्सक हेर्न र के गर्न को लागी बताउन सक्नुहुन्छ।
Itxuri gonzalez भन्यो
कृपया, जरूरी छ!
मेरो चचेरो भाईले पछाडि दायाँ खुट्टामा मेरो बिल्लीको बच्चामा एउटा गार्टर बाँध्यो र मैले उसलाई उसको खुट्टाले धेरै फुलेको पाए। मलाई थाहा छैन म के गरु! कृपया मलाई सहयोग गर्नु! जब मैले यो याद गरेँ, मैले उनको कपडा काटें तर उनी रुँदै थिइनन्, यसले धेरै दुख्यो र उसले धेरै चाट्यो, म उसलाई शान्त गराउन सफल भएँ र अब उनी सुतेकी छन् तर उनको खुट्टा अझै उस्तै छ, मैले के गर्नुपर्छ ?
Itxuri Gonzalez लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि उनी सुधारिएको छैन भने, म उनलाई सक्दो चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजाने सल्लाह दिन्छु।
माफ गर्नुहोस्, म पशु चिकित्सक होइन।
अविश्वसनीय लेख, प्रेमको साथ र धेरै सामान्य ज्ञानको साथ लेखिएको।
तिमीलाई अभिवादन छ
शुभ अपरान्ह, तपाईं मेरो बिरालाको बच्चा लिनुहोस्, म उसलाई पशु चिकित्सकमा लग्यो, उसले एक्स-रे गर्यो र उसले मलाई भन्यो कि उसको फेभर भाँचिएको छ र ऊ अहिले यसमा काम गर्न एकदम सानो छ ... वा होइन, अब म जान्न चाहान्छु कि मैले केहि गर्नै पर्छ, गरीब चीज दुई दिनको लागि सारिएको छैन मलाई मद्दत चाहिन्छ कृपया ... धन्यवाद
यस्तो परिस्थितिमा, बिरालाको बच्चालाई एउटा कोठामा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, यति धेरै त्याग्नुहोस् कि यो धेरै बढ्दछ ताकि फ्र्याक्चर खराब नहोस्।
तपाईं खुट्टा पट्टी गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै गाह्रो छैन।
जे भए पनि, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछ दोस्रो पशु चिकित्सा रायको लागि सोध्नुहोस्।
नमस्ते, मेरी छोरीको बिरालो ल l्गडो थियो ... म उसलाई धेरै चोटि पशु चिकित्सकमा लगें र उसलाई एन्टिबायोटिक र एन्टी-इन्फ्लेमेटरीहरू पनि लगाईदियो। दुई दिन बित्यो र आज उनी मृत भेटियो। मेरी छोरीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। के हुन सक्छ?
म तपाईंको बिल्ली को घाटा को लागी माफी चाहन्छु 🙁
तर उसलाई के भयो मलाई थाहा छैन। म पशु चिकित्सक होइन।
शुभ बिहान आज बिहान म उठेँ र मेरो बिराला मसँग सुत्छिन् र कोठा छोड्दिनन् जब म उठेँ मैले थाहा पाए कि उनी लing्गडो भइन्, मैले उनको पंजामा हेरें र उनको प्याड र औंलाहरू फुलेको थियो तर कहिलेकाहिँ उसले पंजालाई समर्थन गर्‍यो, I थाहा छैन के हुन सक्दछ।
Yensy लाई जवाफ दिनुहोस्
यसलाई जाँचको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानु उत्तम हुन्छ। एक सानो चोट लाग्न सक्छ, तर त्यो केवल एक पेशेवर द्वारा भन्न सकिन्छ।
नमस्ते !!! मेरो बिराला १० दिन पहिले खसेको थियो र उनको खुट्टामा एक गांठ छ र ​​हिंड्दा उसलाई समर्थन गर्दैन। मलाई शंका छ यो भract्ग भयो। म समय मा लेग बेच्न को लागी यो सुधार छ कि छैन हेर्न?
म उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाँदैछु किनकि मसँग पैसा छैन।
तपाईं यसलाई बेच्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, हो, यो कसरी जान्छ जान्नको लागि।
जेनेट सिस्नेरोस भन्यो
उत्कृष्ट लेख .. धन्यबाद।
मेरो श्रीमान्ले गल्तिले मेरो बिरालोको हातमा पाइला टेकाइन् .. उनी लंपड्छिन् र भयानक हिर्काउँछिन्! पशु चिकित्सकले मलाई एक्स-रे लिन भन्यो तर अहिले मसँग स्रोत छैन ... उसले मलाई अरू केहि पनि पठाएन।
उनी अझै पीडामा छिन र जान्न चाहान्छिन् कि तपाईंले मलाई उनको मौखिक सिफारिस गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ .. यो व्याकुल छ! यसले दुख्छ .. x favlr मद्दत गर्दछ
जेनेट cisneros लाई जवाफ दिनुहोस्
हामी खुशी छौं कि लेख तपाईको लागि रूचि थियो, तर म दु: खी छु तर म तिमीलाई सहयोग गर्न सक्दिन।
म पशु चिकित्सक होइन, र पेशेवरहरूले मात्र औषधी दिन सक्ने हुन्छन्।
हामी तपाईंलाई एक पशुचिकित्सकसँग परामर्श दिन सिफारिस गर्दछौं, तपाईले उसलाई के दिन सक्नुहुन्छ भन्ने हेर्न।
नमस्कार, आज बिहान मेरो बिरालाको बच्चा एकदम अनौंठो ब्यूँझ्यो, उनी उनको पछाडि पञ्जालाई सहयोग गर्दिन र धेरै गुनासो गर्छिन्, उनी छिटो सास फेर्छिन्, अनौठो कुरा कि त्यो सुलेकी छैन र कुनै चोटपटक देखिएन; के हुन सक्छ?
यो हुन सक्छ कि तपाईंले विषैले केहि खाएको छ र दुर्घटना पनि भएको छ।
जे भए पनि, उनलाई जति सक्दो चाँडो पशु चिकित्सकले हेर्नुपर्दछ।
मलाई लाग्छ कि मेरो बिरालोलाई अगाध खाडलले काट्यो, किनकि उसले दिनको बगैंचामा उनीहरूलाई खेद्दै बिताएको थियो र उसको खुट्टामा ठूलो चोट लागेको छ र यदि मैले यो समातें भने उनले गुनासो गरे। मैले के गर्नुपर्छ?
नमस्ते मेरो बिरालोको बच्चा एकदम राम्रो थियो तर उनी टेबुलमा जान चाहन्थे तर गति प्राप्त गर्ने क्षणमा मलाई थाहा भएन के भयो, मैले चिच्याइनँ! दुखाइको चिच्याई र ऊ भागे र अब ऊ सुतिरहेकी छिन् र यस्तो लाग्छ कि उसको पंजाले दुख्यो तर मलाई थाहा छैन के भयो! मलाई लाग्छ कि जब उसले आवेग लिन चाहान्थे ऊ एक पछाडि खुट्टामा झुकायो! सत्य धेरै अनौंठो छ किनकि ऊ टेबलमा जान पनि सकेन! म के गरौ ? मलाई लाग्छ यो दुख्छ किनकि यो सानी केटी सर्न चाहन्न!
हो त्यो अनौंठो हो हो। के तपाईसँग आफ्नो पंजा छुनुभयो कि ऊसँग केहि छ कि छैन भनेर हेर्न?
त्यहाँ हिट भएको हुन सक्छ; जे भए पनि, परीक्षाको लागि पशु चिकित्सकमा लैजानु उत्तम हुन्छ। वा यो सुधार भएको छ कि छैन हेर्न सोमवार सम्म कुर्नुहोस्।
कियारा डानिएला भन्यो
नमस्ते! आज जब म ब्यूँझें, मैले मेरो बिरालोलाई लimp्गडो भएको देख्यौं, ऊ हिंड्दा वा बस्दा उसको अगाडिको पञ्जालाई समर्थन गर्न चाहँदैन, अब ऊ सुत्न चाहान्थ्यो र आफ्नो पंजालाई अ h्गालो हाले। तर ऊ पीडाको गुनासो गर्दैन, म के गर्न सक्छु?
Kiara Daniela लाई जवाफ दिनुहोस्
हेर्नुहोस् यदि यसमा स्कर वा केही छ जुन यसमा अड्किएको हुन सक्छ।
यदि तपाईंसँग केही छैन भने तपाईंले आफैंलाई हिर्काउनु भएको हुन सक्छ। चाँडै सुधार गर्नुपर्छ।
तानिया क्विरोगा भन्यो
नमस्ते, मेरो बिरालो, मैले उसको पछाडि खुट्टामा एउटा ओछ्यानमा बोर्ड राखें, यसले धेरै पीडा दिन्छ र ऊ लimp्गडो हुन्छ। के त्यहाँ दुखाइको कुनै औषधि छ?
तानिया क्विरोगालाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, तर म पशु चिकित्सक होइन र म कुनै पनि औषधि सिफारिस गर्न सक्दिन।
तपाईले आफ्नो बिरालालाई स्व-औषधि पनि लिनुहुन्न, किनकि मानव औषधी उसलाई विषाक्त हुन सक्छ।
म कसैलाई डराउन चाहन्न।
के गर्नु पर्छ पशु चिकित्सकलाई लिनु हो, एउटा राम्रो केन्द्रमा, जुन उत्तम अस्पताल हो।
मेरी आमाको बिरालोको बच्चा उसको अगाडिको पंगामा करीव दुई महिनाको लागि हल्का लंगडा थियो।
उनको लिimp्ग अधिक स्पष्ट भएकोले उनीहरूले उनलाई पशुचिकित्सककहाँ लगे जसले एक्स-रे वा केही पनि लिएनन्, एन्टी-इन्फ्लेमेट्रीहरू निर्धारित गरे जसले कुनै सुधार गरेन।
हामी उनलाई मेडिटेरियन वेटरनरी अस्पतालमा लग्यौं (म्याड्रिडमा), उनीहरूले एक्स-रे गरे र उनीहरूले हामीलाई ट्युमर हो भन्ने डरलाग्दो समाचार दिए।
उनीहरूले उनको, छाती, हड्डीको बाँकी भाग, रगत परीक्षणमा राम्रो ध्यान दिए। त्यहाँ ट्यूमरको कुनै विस्तार छैन। एक मात्र समाधान उसको खुट्टामा उसको खुट्टा (दुई दिन पछि तिनीहरूले यसका शल्यक्रिया) काट्नु थियो।
यद्यपि उहाँ १ 16 वर्षको हुनुहुन्छ, यदि ऊ अन्य ठाउँमा देखा पर्दैन भने, उसको अगाडि धेरै जीवन छ। यो अपरेसन पछि १ 15 दिन भएको छ, र हिंड्दा ऊ थाक्छ, ऊ तुरुन्तै उठ्छ र मेयो गर्दैन।
हाम्रो आत्मा भाँच्दछ, यो यस्तो देखेर। मलाई आशा छ यो अस्थायी हो र हिंड्न बल लिन्छ।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण, एक राम्रो पशु चिकित्सक मा जानुहोस्। मलाई माफ गर्नुहोस्, तर धेरै "शटगनहरू" छन्।
तपाईं र तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूलाई बधाई र लामो र खुशीयाली जीवन।
तपाइँको टिप्पणी Yolanda को लागी धन्यवाद। यो निश्चित रूप मा कसैको लागि काम गर्दछ।
मलाई आशा छ बिरालो चाँडै सुधार हुनेछ। धेरै प्रोत्साहन।
मेरो बिरालाको बच्चा आज उनको खिन्न पजाको साथ उठे र उनी हिंड्न सक्दिनन्
नायलीलाई जवाफ दिनुहोस्
सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको पशु चिकित्सकलाई लिएर एक्स-रे लिएको छ र यसलाई बेच्न, यदि आवश्यक छ भने।
सुप्रभात, मेरो कडा बिरालो सडकमा days दिनको लागि हरायो, हामीले उसलाई खोज्यौं र जब हामी उनलाई भेट्टायौं ऊ लme्गडो थियो र उसको तल्लो पेटको ठूलो अंशको साथ उसको छाला छालाको जस्तो छ, चोट लागेको छ, म उसलाई छुन्छु र यसले उसलाई चोट पुर्याउँदैन जस्तो देखिन्छ र ऊ नराम्रा हिँडेको छ, खुट्टाले यसलाई समर्थन गर्दछ र थोरै खाइरहेको छ, मलाई लाग्छ उनीहरूले लात हान्थे, मलाई थाहा छैन, कृपया मद्दत गर्नुहोस्।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
मैले एउटा साइटमा पढें कि सास फेर्न समस्या र एक लम्पि cat बिरालो सम्बन्धित हुन सक्छ। कसैलाई थाहा छ यदि यो सत्य हो भने
डभिएनेलाई जवाफ दिनुहोस्
होइन, सधैं होईन। उसको खुट्टा भाँचिएको हुन सक्छ, तर बिरालोको सास फेर्न सक्ने क्षमता यथावत नै छ।
टाटियाना हर्नान्डेज प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
नमस्कार, आज म बिउँझिएँ र मेरो बिरालोको फलामलाई हेरे, मैले उनलाई जाँचे र हेर कि उसको औंलाको छेउमा सानो सिरिभलर थियो (उसको पनि त्यो फुलाएको औंला छ)
मलाई थाहा छैन उनीसँग के भयो र मैले त्यस्तो केही देखिरहेको छैन जुन उसको शरीरमा दफन भएको जस्तो देखिन्थ्यो, कसैले मलाई के गर्न भन्यो? यदि मैले उसको पञ्जालाई छुन्छ भने उसले प्यारी छोडिदिन्छ र कहिले काँही उनी निदाइरहेको हुन्छ र आफ्नो पञ्जा पनि कुल्चन्छ भने, कृपया कुनै सल्लाह मलाई नचाहिंदो उहाँलाई घृणा गर्नुहोस्।
टाटियाना हर्नान्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्
प्रायः, यो गम्भीर केहि छैन र केहि दिनमा यो आफैले निको पार्नेछ। अब, यदि तपाईले देख्नुहुन्छ कि उसको लंगो झन् खराब हुँदै जान्छ वा उसले धेरै गुनासो गर्दछ भने, म उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्ते, मलाई के गर्ने थाहा छैन, मेरो बिरालो फुलिएको पञ्जाको साथ छ, यस्तो लाग्छ कि उनले आफ्नो पजालाई नाइट्रिक एसिडमा राखे किनभने उसको कोट पहेंलो रंगेको छ, मैले उसलाई पानीले भिजेको छु तर मलाई थाहा छैन के गर्ने, ऊ शान्त छ तर कहिलेकाँही उनी अलि गुनासो गर्दछन् र चाट्छ मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मलाई के गर्ने थाहा छैन
Artistico लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले यसलाई साबुन र पानीले धुनु पर्छ। यदि यो सुधार हुँदैन भने, वा यदि यो बिग्रन्छ भने, तपाईंलाई पशु चिकित्सा सहयोग चाहिन्छ।
शुभ प्रभात, मेरो बिरालो २० बर्षदेखि ल l्गडो भएको छ, म उसलाई पशु चिकित्सक समातेर लगें र उनलाई जाँचेर भनें कि कुनै फ्र्याक्चर छैन कि उसलाई सम्भवतः कुकुरले टोकेको थियो। उनले यसलाई इंजेक्शन दिए, र त्यस्तै भयो। तीन दिन पछि उनको पेटिका बढी फुलेको भयो, अझ स्पष्ट रूपमा उसको कुहिनोमा। म उसलाई पशु चिकित्सकमा फिर्ता लगेँ र तिनीहरूले घाउ खोले र धेरै मस बाहिर आयो, र तिनीहरूले उसलाई फेरि इंजेक्शन दिए। दुई थप हप्ता बितिसकेको छ र अब यो फुलेको छ, तर यो नरम छैन जब यो पू थियो जब सूजन कडा छ। तपाईको टिप्पणीका लागि धेरै धन्यबाद।
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं उसलाई दोस्रो पशु चिकित्सकमा लैजानुहुन्छ, एक्स-रे गरिसकेपछि वास्तवमा उसको साथमा के गलत रहेको छ भनेर हेर्नको लागि र उसलाई उपचारमा राख्नुहोस्, किनकि यो स्पष्ट छ कि तिनीहरूले बिरालोलाई गरिरहेको कुराले मात्र सुधार गर्दैन। ।
नमस्कार शुभ दिन!
हाम्रो बिराला मानोलिटोको एउटा मोच छ, किनकि हामीलाई भनिएको छ कि उसको अस्थिभाषा छ।
हामीलाई थाहा छैन उनले यो कसरी गरे, हामी एउटा सानो शहरमा बस्छौं, र हाम्रो बिरालो जति पटक चाहिन्छ उसको घरको भित्र र बाहिर आउँदछ। हिजो ऊ लme्गडा आएको थियो। हामी मान्दछौं कि यो शहरमा भएको अर्को बिरालो वा कुकुरसित झगडा हुने छ। तिनीहरूले हामीलाई त्यो खुट्टाको लागि आराम गर्न सल्लाह दिए, र यसलाई स्थिर गर्न यसलाई बेच्न। केहि उसलाई एन्टी-इन्फ्लेमेटरि दिन उचित छ? के हुनेछ? र खुराक? छिमेकीले हामीलाई भनेको छ कि डल्सीले उनको बिल्ली कहिल्यै दिएको छ ... ?? के यो गर्न सम्भव छ ??
तपाईको ध्यानाकर्षणका लागि धेरै धन्यबाद, तपाईले ठूलो काम गर्नुहुन्छ !!!
सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाइँ उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहुन्छ र तपाइँले उसलाई कुन औषधि दिन सक्नुहुन्छ भनेर उसले बताउनेछ। तपाईं कुनै बिरालालाई स्व-औषधि दिन सक्नुहुन्न, किनकि यसमा जोखिमको कारण यो हुन्छ।
म पशु चिकित्सक होइन, तर मलाई आशा छ कि तपाईंको मनोलीटो चाँडै नै राम्रो हुनेछ।
धेरै प्रोत्साहन। 🙂
लियान्ड्रो जमोरा भन्यो
हेलो मेरो--महिना पुरानो बिरालाको बच्चा, केहि काँडा उनको दाहिने खुट्टा मा समाहित थिए र ती अहिले बाहिर आयो बिरालाको खुट्टा सुन्निएको छ र हामीले के गर्नुपर्दैन, तिनीहरूले केहि घरेलु औषधी सिफारिस गर्न सक्छन् किनभने अहिले पशु चिकित्सक बन्द छ
Leandro Zamora लाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, म पशु चिकित्सक होइन र मलाई औषधी सिफारिस गर्ने अधिकार छैन।
यो एक पेशेवर द्वारा देखेको हुनु राम्रो हो।
मिल्ड्रेट डायज भन्यो
राम्रो म अचानक एक पानीको बच्चा छ कि अचानक फिर्ता लेग संग देखा सबै पानी थियो र सबैभन्दा खराब केस हिंड्न सक्दिन कि त्यो चिच्याउँदिन कि त्यो कुनै चोट छ कि हुन सक्छ
मिल्ड्रेट डायजलाई जवाफ दिनुहोस्
उसको दुर्घटना भएको हुनुपर्छ। म तपाईंलाई सिफारिस गर्छु कि उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
एन्ड्रेस ओभिडो भन्यो
नमस्कार, पछिल्लो रात जब मेरो बुबाले कार उल्टो राख्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा टायरले मेरो बिरालोको पछाडिको खुट्टामा पार गर्यो, मेरी आमासँग हामी आधारभूत फर्स्ट एड लागू गर्‍यौं, खुट्टा बेचेर, र क्रीम लगाएर, यद्यपि , प्रत्येक चोटि जब हामी यसलाई छुन्छौं वा समर्थन गर्दछौं, यो दुखाइको गुनासो जस्तो देखिन्छ र जब हामी यसलाई ब्यान्डि were गर्दै थियौं मलाई पनि टोक्दछ। मलाई थाहा छैन उसलाई के गर्ने भनेर मलाई थाहा छैन किनकि उसलाई डाक्टरलाई लैजान हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन र पीडा अझै पनि बन्द हुँदैन। मलाई थाहा छैन म दुखाइ रोक्नको लागि अरू केमा आवेदन दिन सक्छु।
एन्ड्रेस ओभिडोलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि बार्किबु.का पशुचिकित्सकहरूसँग परामर्श गर्नुहोस्
जेनिफर सुस्त भन्यो
एक बर्ष पहिले उनीहरूले मेरो बिरालोको घुँडामा शल्यक्रिया गरे किनकि त्यसले यो भract्यो, पशु चिकित्सकले मलाई भन्यो कि ऊ फेरि पतन भयो भने उसको खुट्टामा केहि हुनेछैन।
तर केहि दिन अघि उसले चुदाई गर्न थाल्यो, ऊ यस्तो गरी तीन दिन भइसक्यो, म के गर्ने?
जेनिफर सुस्तलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उसलाई फेरि डाक्टरमा लैजानुहोस् कि उनलाई के भयो। तपाईसँग एउटा बम्प बाहेक अरू केही हुन सक्छ जुन आफैंमा उपचार समाप्त हुन्छ, तर तपाई यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ।
इलिआना बैरिओनेभो भन्यो
नमस्कार ... के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो बिराला रातमा बाहिर गयो, र अर्को दिन म फर्केर आउँदा ऊ फर्केर आयो, तर ऊ दाहिने पञ्जाबाट लme्गडो भयो, म उसलाई छुने चाहन्नँ, यद्यपि स्पष्ट रूपमा पीडा त्यति थिएन, मैले उनलाई बनाएँ। क्यामोमाइल पानीको सresses्कुचन र बाहिर आउनुहोस्, आज खुट्टा बस्ती रहेको छ, तर यो अन्य भन्दा लगभग दुई गुणा बढि फूलिएको छ, यसले पीडाको गुनासो गर्दैन, तर मलाई थाहा छैन कि यो सामान्य छ वा केही गम्भीर हुन सक्छ, कृपया। मद्दत
इलिआना ब्यारिओनेभोलाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालो खराब प्याजाको साथ फिर्ता आएको छ।
सिद्धान्तमा, यो अलि बढि सामान्य हुनु हो, तर यदि कुनै पशु चिकित्सकले यो देखेमा चोट पुर्याउँदैन।
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस् (मँ छैन)।
लुसेरो अबिगईल भन्यो
मेरो बिरालोको बच्चा लात भयो र उनी हिंड्न सक्दैनन् उनी क्रलमा
Lucero अबीगईललाई जवाफ दिनुहोस्
हामी उनलाई सकेसम्म चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजाने सल्लाह दिन्छौं। तिनीहरूले तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छन्।
नमस्ते, मेरो बिरालाको बच्चाले उनको देब्रे खुट्टाको खुट्टामा पाइला टेकेको थियो, उसलाई हिंड्न गाह्रो छ र उनी धेरै गुनासो गर्छिन्, थप रूपमा, जब उनी सुत्न लाग्छिन्, उनीको टाउको काम्न थाल्छिन्, उनीसँग के हुन सक्छ र म उनलाई कसरी राहत दिन सक्छु ?
यदि उनी सुधारिएको छैन भने, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु। म होइन।
मारिया मातो भन्यो
नमस्कार, मेरो बिरालोको केस विशेष छ किनकि यसले आफैंलाई छुने अनुमति दिदैन, यो सडकबाट हो तर म यसलाई खुवाउँछु। एक दिन ऊ खाना लिन आउँदा मैले उसको खुट्टा भाँचेको देखेको थिएँ र मलाई थाहा छैन म कसरी उसलाई सहायता गर्न सक्छु, जब ऊ सुत्दा ऊ आफ्नो खुट्टामा V मा निहित हुन्छ र ऊ अक्सर गुनासो गर्दछ।
मैले के गर्नु पर्छ ????
मारिया मतोलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि यो एक बिरालो बिराला हो भने, यसलाई उत्तम बिरालोको पिंजरा-पासोले समातेर यसलाई डाक्टरमा लैजानु उत्तम हुन्छ।
यसले तपाईंलाई एउटा ईन्जेक्शन दिन्छ जसले तपाईंलाई शान्त पार्छ, र तपाईं यसको उपचार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
vAyla kOMo hEl papuH भन्यो
मेरो बिरालोमा एउटा सूजिएको पंजा छ, म के गर्ने: वी?
VAyla kOMo hEl pApuH लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। म होईन र मसँग यो के हो भन्न सक्दिन।
मेरो बिरालो अकस्मात ढोकामा यसको पञ्जाले समातियो, यो लimp्गडो हुन थाल्यो र गुनासो गर्न थाल्यो, मैले तुरुन्तै यसको थाँतीमा काठको टुथपिक लगाएको थिए जुन मैले ल्याएको छु, मैले यसलाई राम्रोसँग बेचेको छु, यद्यपि यो लimp्गडो छ, अब गुनासो गरेन।
प्रश्न यो हो, यदि यो एक मोच हो भने, यसलाई पुनः प्राप्त गर्न कति समय लाग्नेछ? भाग्यशाली कुनै हड्डी वा जस्तो बाहिर आयो, त्यसैले म यो एक मोच मान्दै छु। म अनुमान लगाउँछु कि यो मोचको गम्भिरतामा निर्भर गर्दछ, तर पट्टि हटाउन सक्षम हुनको लागि एक सानो अनुमानित कुरा जान्नु राम्रो हुन्छ, तपाईंलाई पक्कै पनि यो मनपर्दैन।
धेरै धेरै धन्यवाद र आशावादी उत्तर।
AMD लाई जवाफ दिनुहोस्
खैर, म पशु चिकित्सक होइन। तर लगभग तीन वा चार हप्ता। जे भए पनि, यदि यो बिग्रन्छ भने, पशु चिकित्सकमा लैजान नहिचकिचाउनुहोस्।
जोस डानियल भन्यो
नमस्ते, म मेरो--महिना पुरानो बिरालासँग खेल्दै थिएँ कि म उनलाई फ्याँक्छु र उनलाई समात्न सक्छु तर उनी धेरै टाढा गए र उनको दाहिने पछाडि हिर्काए र ऊ ल to्गडो हिर्काउन थाल्छिन्, म के गर्छु, मलाई डर छ यो गम्भीर छ
जोस डानिएललाई जवाफ दिनुहोस्
सकेसम्म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
सोनिया गुटी भन्यो
हामीले मेरो बिरालालाई सडकबाट उठायौं, जब यो सर्दी, छाला, इत्यादिको कुरा आउँछ भने यो सँधै नाजुक भएको छ। ऊ बाहिर जान्छ किनकि हामी खुला पर्वतमा बस्छौं जहाँ सडकमा धेरै बिरालाहरू छन्।
ऊ ल l्गडो घर आयो र मैले उसलाई डाक्टर समातें कि यो खुट्टा वा प्याड हो कि भनेर हेर्न र उसले मलाई भने कि यो केही डिकबाट हुन्छ वा अचानक झर्छ जुन चाँडै नै ठीक हुनेछ।
म times पटक भन्दा बढि गएँ र त्यसपछि मैले उसलाई अर्कोसँग लगेँ, जुन उनी एक साथी थिए, त्यसैले मलाई उनलाई केहि मस्कोसाना क्याप्सुल दिन भन जुन १००% सेसस हो। यस संग छोटो समयमा उसले राम्रो गरिरहेको छ।
सोनिया गुट्टीलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले अर्को पशु चिकित्सकमा लैजानु ठीक थियो यदि पहिलोले तपाईंलाई विश्वास गर्दैन भने।
तपाईले कहिल्यै बिरालालाई स्व-औषधि सेवन गर्नु हुन्न, किनकि यो उसको लागि खतरनाक हुन सक्छ।
हामी उनलाई डाक्टरमा लैजाने सिफारिस गर्दछौं, वा फोनमा उसलाई कल गर्न।
हामी पशु चिकित्सक होइनौं र हामी तपाईंलाई राम्रोसँग मद्दत गर्न सक्दैनौं।
नमस्कार! मसँग एउटा बिरालोको बच्चा छ जो अब देखि दुई महिना हुनेछ। आज बिहान, मेरो कोठामा पुग्ने सीढीहरूमा चढ्ने कोशिश गर्दै, ऊ पसेको हुनुपर्छ किनकि मैले उसलाई उसको घाइते पजाले भेट्टाएको थिएँ (यो नम थियो र उसको भुँडीमा गुलाबी रंगको स्थान रहेको छ जस्तो देखिन्छ कि यसले थोरै खसेको थियो)। यो केहि घण्टा अघि भएको थियो, उनले खाए र पानी पिए, उनले पनि खेल्छन् र निस्सहाय पनि हुँदैन, तर यदि ऊ हिंड्दा ल and्गडो छ र घाइते भएको त्यो सानो खुट्टालाई समर्थन गर्छ भने, के तपाईं उसलाई मुसब्बरको साथ चित्रण गर्नुहुन्छ?
अर्को अचम्मको कुरा यो हो कि उनले चोट पारे पछि धेरैपटक छींक पारेको छ। यसले उसलाई असर गरेको देखिदैन तर यो विरलै देखिन्छ कि उसले आफैंलाई हिर्कायो र छीँंक लागिरहेको छ, के मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु भन्दा केही दिन पहिले कुर्नु पर्छ? धेरैलाई जस्तै, मसँग सल्लाहको लागि धेरै पैसा छैन। धेरै नै आगाडि धन्यबाद (मबाट र कोपिटोबाट)
तिम्रो बिरालोको बच्चा कस्तो गर्दैछ? जब तिनीहरू पपीहरू हुन् उनीहरू एकदम प्रतिरोधी छन्, तर यदि यो सुधारिएको छैन भने, म पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
मेरो बिरालो लimp्गडो छ र सुगन्धित मुटु छ, यो एक घण्टा अघि हुन थालेको छ, हामीलाई थाहा छैन के गर्नुपर्दछ हामीलाई मद्दत गर्न सक्दछ? जब तपाइँ यसको पञ्जा छुनुहुन्छ, यसले तपाइँलाई आक्रामक बनाउँदछ, त्यसले यसलाई बेस्सरी खान्छ, यो सबै समय काट्छ। हामीले के गर्नुपर्छ?
हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं, किनकि हामी पशु चिकित्सकहरू होइनौं। यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाईले एक हेर्नुहोस्।
हामी आशा गर्दछौं तपाईं सकेसम्म चाँडो निको हुनुहुनेछ।
मटियास अनबल चापरो भन्यो
नमस्ते मेरो बिरालो एक आइतवार अर्को राम्रो खायो अर्को दिन उल्टो उल्टो ऊ फेरि खाएन ऊ २ दिन को लागी यस्तै थियो हामीले हामीले डाक्टरलाई बोलायौं उसलाई एक इन्जेक्शन दिए र उसलाई ड्रप दिए त्यसपछि अर्को दिन ऊ लimp्गडो हुन थाल्यो। तल र सुत्न तर कहिलेकाहीं उनी भागिन् १ घण्टा र त्यसपछि फर्केर आउँछिन् उनी अहिले पातलो र निद्रामा छन् सारा दिन उनी मेरो कलमा कुनै प्रतिक्रिया गर्दिन न त उनी मलाई केही चाहिन्छ पुग्छ मेरो बिरालो about महिना पुरानो छ
मटियास अनबल चापरोलाई जवाफ दिनुहोस्
पशु चिकित्सकले हेर्नु पर्छ हामी छैनौं र हामी तपाईंलाई त्यसका साथ मद्दत गर्न सक्दैनौं।
हामी आशा गर्दछौं कि यो सकेसम्म चाँडो सुधार हुनेछ। अभिवादन र प्रोत्साहन।
नमस्कार, मेरो बिरालोको उसको प्याडमा चोट लागेको छ र ऊ आफ्नो फुलेको पंजासँग उठ्यो मैले उसलाई सफा गरें तर अलिकति मस बाहिर आयो कि मैले उसलाई लगाउन सकूँ ताकि सुजन तल जान्छ र चाँडो निको हुन्छ।
यशिरलाई जवाफ दिनुहोस्
हामी क्षमाप्रार्थी छौं तर हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं किनकि हामी पशु चिकित्सक होइनौं। घावलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइडले सफा गर्नुहोस्, र यदि यो सुधारिएन भने, हामी यसलाई एक पेशेवर हेर्नको लागि सिफारिस गर्छौं।
हामी आशा गर्दछौं तपाई छिट्टै नै स्वस्थ हुनुहुनेछ। अभिवादन र प्रोत्साहन।
नमस्कार वा बिरालोको बच्चा, एउटा पाना तल झरे, यो एकदमै खसेको छ, उसलाई एउटा सानो खुट्टा सार्न गाह्रो छ, यो बढी हो म उसको पछाडि खुट्टा खोल्छु र उस्को गुनासो हुन्छ र उसको आँखा झर्छ… ऊ उठ्दा उसले यो समर्थन गर्दैन।
Irupe लाई जवाफ दिनुहोस्
यो अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ कि उनी पशु चिकित्सकले देखिन सक्दछ किनकि उनको खुट्टा भाँचिएको हुन सक्छ।
तिनीहरूले संयोगले मेरो बिरालोको पछाडिको खुट्टामा हिडे र उसको खुट्टा बन्द भयो, उनी सामान्य हिंड्छन्, ऊ गुनासो गर्दैन तर उसको पञ्जा झुण्डिन्छ र मलाई पशु चिकित्सकमा लैजान पैसा छैन, म आफैंको खुट्टा आफैंलाई पट्टी बाँध्न डराउँछु। , के यदि मैले यो गलत गरे र ऊ लme्गडा रहन्छ भने
हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं तपाईंको क्षेत्रमा एक जनावरको आश्रयमा सम्पर्क गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्नेछन्।
राम्रो र हामी मध्ये को लागी एक खुट्टा कि तपाइँ सिफारिश गर्न को लागी एक अपरेशन बर्दाश्त गर्न सक्नुहुन्न?
म एक पशु चिकित्सक छैन। सायद एक पशु चिकित्सक तपाइँ अन्य सस्ता विकल्प दिनेछन्।
नमस्कार, शुभ दिन, मेरो बिरालो एक छिमेकी बाट एक कदम प्राप्त भयो, उनी गुनासो गर्दैनन् जब सम्म एक उसलाई छुने छैन, तर उनी पंजा समर्थन गर्न चाहँदैनन्, त्यो एक घण्टा पहिले थियो, यो केहि धेरै गम्भीर हुनेछ
मँ तपाइँको बिरालो को लागी के भयो माफी चाहन्छु। मलाई लाग्दैन कि यो गम्भीर छ, तर यदि यो सुधार गर्दैन भने यो एक पशु चिकित्सक हेर्न को लागी राम्रो हुनेछ।
बिरालाहरुमा नराम्रो सास: यसको कसरी सामना गर्ने?
लुइस वेनको विवादास्पद बिरालो रेखाचित्र